NLD YOUTH LA MALAYSIA: September 2012
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ယေးလ်တက္ကသိုလ် မိန့်ခွန်းအပြည့်အစုံ
(သမိုင်း အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုအကြောင်း သ်ိမ်းထားချင်တာနဲ့ ပြန်လည်ကူးယူပြီး တင်လိုက်တာပါ)
ဒါပေမယ့် စာသင်ခန်းထဲမှာ ဆရာတွေ သင်လေ့ရှိတဲ့ Rule of Law မျိုး မဟုတ်ပါဘူး ။ ဆရာတွေက ကျမထက်သာအောင် ပိုပြီး ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ပြောနိုင်ကြမှာပါ ။ အခု ကျမက အဲဒီ Rule of Law ဆိုတာကို ကျမမြင်တဲ့ ၊ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေမြင်တဲ့ ပုံစံရယ် ၊ ဘာကြောင့် အဲဒါဟာ ကျမတို့အတွက် အရေးကြီးသလဲဆိုတာကို ပြောချင်တာပါ ။
အဲဒီ Section 10 ဆိုတဲ့ ဥပဒေမှာ အပိုင်း နှစ်ပိုင်းပါပါတယ် ၊ 10 A နဲ့ 10 B ပါ ။ 10 A အရ လူတစ်ယောက်ကို ရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းမရှိဘဲ ထောင်ချလို့ ရပါတယ်။ 10 B အရကတော့ ရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းမရှိဘဲ အိမ်အကျယ်ချုပ်ချလို့ ရပါတယ် ။ ဒီတော့ ကျမက 10 B အရ အိမ်မှာ အကျယ်ချုပ်ကျခဲ့တာပါ ။ အဲဒီ 10 B ဥပဒေအရ ဖမ်းမိန့်ကို ခြောက်လတစ်ကြိမ် ထပ်တိုးရတယ် ……အဲဒီလိုဆက်ပြီး သုံးနှစ်တိတိ ထပ်ထပ်တိုးသွားလို့ ရပါတယ် ။ ထပ်တိုး မတိုး ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့ သူတို့ အခေါ် ” ဗဟိုဝန်ကြီးများကော်မတီ ” က ချမှတ်တာပါ ။ အဲဒီအဖွဲ့မှာ ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးအပါအ၀င် ၀န်ကြီး သုံးလေးဦးပါပါတယ် ။
ဒီလိုနဲ့ ကျမအကျယ်ချုပ်ကျပြီးနောက် ခြံထဲမှာ အစောင့်စစ်သားတွေ လာနေပါလေရော……… အဲဒီအထိလည်း ဒါသူတို့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိလို့ လုပ်တာဘဲလို့ ထင်ခဲ့မိတယ် ။ နှစ်အတော်ကြာမှ ကျမနားလည်သွားတာက ကျမခြံထဲမှာ ဒီလို လာပြီး အခြေချနေထိုင်ခွင့် သူတို့မှာ လုံးဝမရှိဘူး ဆိုတာပါဘဲ ။ အဲဒီတော့မှဘဲ ငါ့ တိုင်းပြည်က ဥပဒေအကြောင်း ငါ အတော်မသိပါလား ဆိုတာကို စပြီး သဘောပေါက်သွားခဲ့ရတယ် ။ ဒီဥပဒေတွေကို တကယ်လေးစားလိုက်နာမှု ရှိမရှိ ဆိုတာလည်း အတော်လေး မသိခဲ့တာဘဲ ဆိုတာကိုပါ နားလည်သွားခဲ့တယ် ။
ဒီတော့ ကျမကိုယ်တိုင်ကြုံရတဲ့ အတွေ့အကြုံက မြန်မာပြည်မှာ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိဘူး ဆိုတာကို နားလည်သွားစေခဲ့ပါတယ် ။ ဥပဒေဆိုတာ ပြည်သူကို ကာကွယ်ပေးဖို့ ထားတာမဟုတ်ဘဲ အာဏာရှိသူတွေက သူ့တို့အကျိုးအတွက် အသုံးချနေခဲ့ကြတာပါ ။ ။ Section5တို့ ၊ Section 10 တို့၊ နောက်ပြီး တခြား Section တွေ ရှိပါသေးတယ် ။ အဲဒီထဲမှာ တရားမ၀င် အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဥပဒေ Section 17 နဲ့လည်း ကျမအတော့်ကို ရင်းနှီးလာရသေးတယ် ။ ဒါတွေဟာ NLD ပါတီဝင်တွေကို သူတို့ ကြိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ကြိုက်သလောက် ထောင်ချလို့ ရအောင် စစ်အစိုးရက သုံးခဲ့တဲ့ Section တွေပါဘဲ ။
အဲဒီအဖွဲ့ကို ဦးဆောင်ဖို့ ကျမရွေးလိုက်တဲ့လူက အဲဒီတုန်းက ပါတီ ဥက္ကဖြစ်တဲ့ ဦးတင်ဦးပါဘဲ ။ သူက ဟိုးအရင်က စစ်တပ်မှာ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဖြစ်ခဲ့ဖူးပြီး ကျွမ်းကျင်တဲ့ ရှေ့နေ တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်တယ် ။ စစ်တပ်က အထုတ်ခံလိုက်ရပြီးနောက် ဥပဒေဘက်ကို လိုက်စားခဲ့တာပါ ။ အဲဒီလိုနဲ့ ကျမက ဥပဒေအကူအဖွဲ့ကို ဖွဲ့ဖို့ သူ့ကိုပြောတယ် ။ ဒါမှလည့်း ကျမတို့ ပါတီဝင်တွေ Section တစ်ခုခုနဲ့ အစွဲခံရရင် ကာကွယ်ပေးလို့ရအောင်ပါ ။ ဒီ Section တွေအားလုံးဟာ အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးသမားတွေကို နိုင်ငံရေးကနေ ဆွဲထုတ်လိုက်ဖို့ရာအတွက် ထောင်ချဖို့ ဆင်ခြေတွေချည်းပါဘဲ ။
ကျမရဲ့ အကြံကို ဦးတင်ဦးက လိုက်လျောပါတယ် ။ သူက အင်မတန် ကျွမ်းကျင်ပြီးအတွေ့ အကြုံများတဲ့ စစ်သားတစ်ယောက်ပါ ။ အမိန့်ကိုလည်း တသွေမတိမ်းလိုက်နာတတ်တဲ့သူပါဘဲ ။ သူက ကျမကို commender လို့ ခေါ်လေ့ရှိတယ် ။ အဲဒီလိုနဲ့ ကျမအကြံပေးတော့ သူက အဲဒီအဖွဲ့ကို ဖွဲ့ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် လအတော်ကြာတော့ သူက အဲဒီအဖွဲ့ရဲ့ ထိရောက်မှုကို သူအယုံအကြည်မရှိဘူးလို့ ဆိုလာတယ် ။ ကျမပြောလို့သာ လုပ်ရတာ ၊ ဘာမှ အရာရောက်မယ်မထင်ဘူး တဲ့ ။ Section အမျိုးမျိုးနဲ့ တရားစွဲခံရတဲ့ ကျမတို့လူတွေကို ကာကွယ်ဖို့ကြိုးစားပေမယ့် ဘယ်တစ်မှုမှ နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ သူက ဆိုတယ် ။
တချို့ကလည်း မေးကြတယ် ……တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို တိုင်းရင်းသားကိစ္စရှေ့က ထားလို့ ကောင်းပါ့မလားတဲ့ ။ အဲဒါကို လက်တွေ့ကျကျပြောရရင် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးမရှိဘဲနဲ့ တိုင်းရင်းသားပဋိပက္ခကို ငြိမ်းသွားအောင် လုပ်လို့မရပါဘူး။ တရားဥပဒေအတိုင်း ဖြစ်ရရုံမကဘဲ အဲလိုဖြစ်တာကိုပါ သိသာမြင်သာစေပါ့မယ်ဆိုတာကို တိုင်းရင်းသားတွေကို ကတိမပေးနိုင် သရွေ့ကတော့ သူတို့ဘက်ကလည်း ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကို စိတ်ချလက်ချ ယုံကြည်မှုရှိရှိ ပါဝင်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ ဒီတော့ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဟာ မြန်မာပြည်ရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ လူ့အဖွဲ့အစည်းဆီကို သွားရာမှာ ပထမဆုံးခြေလှမ်းပါဘဲ ။ ကျမတို့ရဲ့ နေ့စဉ်ဘ၀ကို အုပ်ချုပ်နေတာဟာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာ ကျမတို့ ခံရဖူးတဲ့ အတွေ့အကြုံအရ သိပါတယ် …..။
ထောင်ထဲက ကျမ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ပါတီဝင်တွေထက်စာရင် ကျမရဲ့ အိမ်အကျယ်ချုပ်က အများကြီးသက်သာပါသေးတယ် ။ သူတို့ကို ထောင်ထည့်ပို့လိုက်တဲ့ Section5ဆိုတဲ့ ဥပဒေကလည်း လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ရာမှာ အတူတူပါဘဲ ။ အဲဒီ Section5မှာ ခပ်ဆန်းဆန်း အပိုင်းလေးတစ်ပိုင်းကလည်း ပါသေးတယ် …..အဲဒါကတော့ နိုင်ငံတော်အစိုးရကို အကြည်ညိုအချစ်ခင်ပျက်စေသူကို Section5နဲ့ ချလို့ ရသတဲ့ ။ ( ရယ်သံများ ) ဒီတော့ ကျမမေးချင်တာက တစ်စုံတရာအပေါ် လူတစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်ခင်မှု လျော့သွားစေတယ် ဆိုတာကို ဘယ်လို တိုင်းတာဆုံးဖြတ်ပါသလဲ ။ အင်မတန် မသေချာ မရေရာတဲ့ ဥပေဒဆိုတော့ ဘယ်သူ့ကိုမဆို အဲဒီအောက်မှာ ဆွဲထည့်ပစ်လို့်ရနေတယ် ။ ဒါကြောင့်ဘဲ ကျမတို့ ဒီကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ Rule of Law ဆိုတာကို ရှေ့ဆုံးက တင်ပြီး ၀င်ပြိုင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါဘဲ ။
ရွေးကောက်ပွဲမှာ ၄၄ နေရာမှာ ကျမတို့က ၄၃ နေရာနဲ့ နိုင်ခဲ့ပြီး လွှတ်တော်ထဲ ရောက်လာ ပါတယ် ။ အဲဒီထဲရောက်ပြီးကတည်းက ကျမကို လွှတ်တော်ဥက္ကဌက ” တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကော်မတီ ” မှာ ဥက္ကဌလုပ်ခွင့်ပေးပါတယ် ။ ( ရယ်သံများ ) ။ ရှင်တို့ ရယ်ကြမယ်ဆိုတာ ကျမသိပါတယ် ။ ကျမအဲလို Rule of Law and Tranquility Committee လို့ ပြောရင် လူတိုင်း ပြုံးတတ်ကြတယ်။………..ဒါပေမယ့် ရှင်တို့ တွေးမိတာလေးက ကောင်းတဲ့အတွေးပါ ( ရယ်သံများ ) ။
တိုင်းပြည်ထဲမှာ ဥပဒေစိုးမိုးရေးကို တကယ်ကျင့်သုံးစေဖို့ ခြေလှမ်းတစ်ရပ်အနေနဲ့ ကျမတို့ဟာ အငြိမ်းစားယူထားတဲ့ တရားသူကြီးတွေ ၊ အတွေ့အကြုံရင့်တဲ့ ရှေ့နေတွေနဲ့ ဆွေးနွေးပွဲ လုပ်ခဲ့ကြတယ် ။ တိုင်းပြည်ထဲမှာ ဥပဒေပြန်စိုးမိုးလာစေဖို့ ဘာတွေလိုအပ်မလဲဆိုတာ သိအောင်ပါ ။ ” ပြန်စိုးမိုးလာဖို့ ” ဆိုတဲ့ စကားကို သုံးရတာက အရင်တုန်းက နိုင်ငံတွင်းမှာ ဥပဒေစိုးမိုးမှု ရှိခဲ့ပါတယ် ။ တရားသူကြီးဟောင်းတွေ ရှေ့နေဟောင်းတွေထဲက တစ်ယောက်က လွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့နောက် မြန်မာပြည်သူတွေ ခံစားခွင့်ရဖူးတဲ့ လွတ်လပ်ညီမျှတဲ့ တရားရေးမဏ္ဍိုင်အကြောင်းကို ပြောပြပါတယ်….။ အဲဒီတုန်းက ကျမတို့နိုင်ငံဟာ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ကျင့်သုံးခဲ့ပြီး တရားရေးဘက်မှာ အတော်ကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရှိပါတယ် ။
မြန်မာ့တရားရေးမဏ္ဍိုင်ရဲ့ သမိုင်းကို ဖတ်ချင်ရင် Yale တက္ကသိုလ် Law School မှာ တက်သွားတဲ့ ဒေါက်တာမောင်မောင်ရဲ့ စာအုပ်ကို ဖတ်လို့ပါတယ် ။ သူက မြန်မာပြည်မှာ ပထမဆုံးအာဏာသိမ်းမှုမတိုင်ခင်ကာလက Yale Foundation က စကောလားရပြီး နှစ်နှစ်လောက် ပညာသင်ခွင့်ရခဲ့သူပါ ။ သူက ၁၉၈၈ အရေးအခင်းနောက်ပိုင်းမှာ မြန်မာပြည်သမ္မတ ခဏလေး ဖြစ်လိုက်ပါသေးတယ် ။ ဒါပေမယ့် ရာထူးမှာတော့ မကြာခဲ့ပါဘူး ။ သူ့စာအုပ်မှာ တချိန်တခါက ရှိခဲ့ဖူးတဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ တရားရေးမဏ္ဍိုင်အကြောင်းကို တွေ့နိုင်ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် စစ်တပ်အာဏာသိမ်းလိုက်တော့ ဒီလွတ်လပ်မျှတမှုလည်း ပျောက်သွားခဲ့ရတယ် ။ ရှေ့နေကြီးတွေ တရားသူကြီးဟောင်းတွေက ဒီလွတ်လပ်မျှတမှုကို ပြန်ရှင်သန်စေချင်ကြတယ် ။ တကယ်လည်း ဒါဟာ အရမ်းအရေးကြီးတဲ့ အချက်တစ်ခုပါဘဲ ။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာ တရားရေးဌာနဟာ အစိုးရတွင်းအုပ်ချုပ်သူများလက်အောက်ကို လုံးဝကျရောက်နေခဲ့တယ် ။ နိုင်ငံရေးသမားတွေကို စစ်ဆေးတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ တရားသူကြီးမင်းတွေဟာ စာအိတ်ကလေးတစ်ခုသူတို့ ရှေ့ကိုရောက်လာဖို့ ပေါ်တင် ဘဲ စောင့်ကြပါတယ် ……အဲဒီစာအိတ်ကလေးထဲမှာမှ တရားခံကို ဘယ်နှစ်နှစ်ချပါဆိုတဲ့ အမိန့်ပါတာကိုး ။ အဲဒီတော့မှ အဲဒီအမိန့်မှာ ပါတဲ့ နှစ်အတိုင်း တရားသူကြီးက ဘယ်နှစ်နှစ်ဆိုပြီး အမိန့်ချတာ ။
ခုနကပြောတဲ့ အစည်းအဝေးမှာ ကျမတို့ရဲ့ အကြံပေးတချို့ ပြောတာက လွှတ်လပ်မျှတတဲ့ တရားရေးမဏ္ဍိုင်ကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ယူဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းက တရားသူကြီးအလောင်းအလျာတွေကို သင်ကြားပေးဖို့ဘဲ တဲ့ ။ ရှေ့နေဟောင်းကြီး တစ်ယောက်ပြောတယ် ……မြန်မာပြည်မှာ ဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတာဟာ ဥပဒေရေးရာမှာ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ပညာရှင် ရှေ့နေတွေ မရှိတော့လို့ဘဲ လို့ ဆိုပါတယ် ။ ဒါကြောင့်ဘဲ မြန်မာနိုင်ငံက တရားရုံးတွေမှာ လာဘ်စားမှုတွေ အကြီးအကျယ်ရှိနေတာပေါ့ လို့လည်း ပြောပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ပညာတတ်ရှေ့နေတွေကို မွေးထုတ်ပေးမှဘဲ လက်ရှိအခြေအနေကို ကယ်တင်နိုင်မယ်လို့လည်း သူက ဆိုပါတယ် ။ ကျမကတော့ အဲဒီလို တွေးတာဟာ သိပ်ရိုးစင်းလွန်းတယ်လို့ ထင်ပါတယ် ။ နှစ်ပေါင်းများစွာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတွေ ကိုပျောက်အောင်လုပ်ဖို့ ဆိုတာ အဲလောက် မလွယ်ပါဘူး ။ အကျင့်ပျက်နေပြီးတဲ့ တရားသူကြီးတွေဟာ Yale တက္ကသိုလ်လိုနေရာက စပယ်ရှယ်သင်တန်းတွေ လာတက်ရုံနဲ့ အကျင့်ပြန်ကောင်းသွားမှာမှ မဟုတ်တာ ( ရယ်သံများ )
ဒီတော့ သူတို့ကို reeducation လုပ်ပေးရမယ်ဆိုတာ ပြန်လည် ပညာသင်ပေးခြင်းတစ်ခုတည်း ကို ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး ။ သဘောထား attitude တွေ ၊ စိတ်ထား mindset တွေကိုလည်း reeducation လုပ်ပေးရမယ် ( ပြန်လည်လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ပေးရမယ် ) ။ ဒီလို ဇိမ်ကျနေတဲ့ ဘ၀တွေနဲ့ အကျင့်ပါနေတဲ့သူတွေကို သင့်တော်တဲ့ စားဝတ်နေရေးတစ်ခုနဲ့ လူရိုသေ ရှင်ရိုသေပြီး သန့်ရှင်းတဲ့ ဘ၀တစ်ခုကို နေတတ်ဖို့ ဘယ်လို သင်ပေးကြမလဲ …… ဒါဟာ တကယ်ခက်တဲ့ အလုပ်ပါဘဲ ။
အဲဒီမှာတခါ Rule of Law ဆိုတာ ပါလာပြန်ပါတယ် ။ သင့်တော်တဲ့ အရေးယူမှုတွေဆိုတာ လုပ်ကို လုပ်ရမယ် ။ ” မင်းတို့ကို အခု သင့်တော်တဲ့ လခတစ်ခုပေးမယ် ၊ ဒါနဲ့ မျှတအောင်နေ ” လို့ ဆိုရုံနဲ့ မလုံလောက်တော့ပါဘူး ။ အကျင့်ပျက် ၀န်ထမ်းတွေ ၊ အကျင့်ပျက် တရားသူကြီးတွေကို အရေးယူမယ့် ဥပဒေတွေ ကျမတို့မှာ ရှိရပါမယ် ။ ဒီတော့ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကနေ နောက်ထပ်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုတစ်ခုကို မွေးဖွားသွားပေးပါလိမ့်မယ် ။ ကျမတို့ဟာ တရားရေးဘက်ကလူတွေကို ဥပဒေကို လိုက်စားလေးနာစေခြင်းအားဖြင့် ဒီလုပ်ငန်းကို စတင်ရမှာဖြစ်တယ် ။ ဒါသိပ်တော့ လွယ်မယ့် ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး ။ တရားရေးဘက်မှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေလုပ်ဖို့ ကျမတို့မှာ အကူအညီလိုပါတယ် ။
အဲဒီအချိန်ထိ မရောက်သေးသရွေ့ကတော့ ကျမတို့ဟာ စိတ်ချရတဲ့ ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ပြီလို့ ပြောလို့ မရသေးပါဘူး ။ လူတွေက ကျမကို မေးလေ့ရှိကြတယ် ၊ ” နောက်ပြန်မလှည့်မယ့် ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ကို ရောက်နေပြီလား ” တဲ့ ။ ကျမကတော့ မရောက်သေးဘူး လို့ဘဲ ဖြေပါတယ် ။
ဒါကြောင့်ဘဲ ကျမတို့က တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးရယ် ၊ တိုင်းရင်းသားပဋိပက္ခတွေ အဆုံးသတ်ရေးရယ် ၊ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရေးရယ် သုံးချက်ကို ဒွန်တွဲထားတာပါ ။ ဒါတွေအားလုံးဟာ ဆက်စပ်နေပါတယ် ။ ဒီမိုကရေစီကို ပြန်လည်ရချင်တယ်ဆိုရင် ဒီသုံးခုကို ရကို ရမှဖြစ်မယ် ။ ဒီသုံးခုမှာ တစ်ခုမရှိရင် နောက်နှစ်ခုလည်း အလုပ်မဖြစ်ပါဘူး ။ အခြေခံဥပဒေကို မပြင်ဘဲ ဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ တိုင်းရင်းသားငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာမရနိုင်သလို ဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိဘဲနဲ့ တခြားနှစ်ခုကိုလည်း မရနိုင်ပါဘူး ။ ဒီလို ဆက်စပ်နေတာကြောင့်လည်း ကျမတို့ဟာ ဥပဒေစိုးမိုးရေးကို ပြန်ရဖို့ဆိုတာကို အရမ်းကို အလေးထားဆောင်ရွက်နေကြတာပါဘဲ ။ ဒါဟာ ဘာကိုဆိုလိုတာလည်းဆိုတော့ ကျမတို့ ပြည်သူတွေဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ ဥပဒေဘောင်အတွင်းမှာ ဒီထက်ပိုပြီး လုံခြုံစိတ်ချစွာနေလို့ရရပါမယ် ။ ” တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု Rule of Law ” ဆိုတာ ” ဥပဒေနဲ့ အုပ်ချုပ်ခြင်း Rule by Law ” ဆိုတာနဲ့ မတူမှန်း ဒီက ဥပဒေကျောင်းသားတွေကို ရှင်းပြနေစရာမလိုဘူးလို့ ကျမထင်ပါတယ် ။ ဥပဒေတွေချည်းရှိရုံနဲ့ မရဘဲ မျှတတဲ့ ဥပဒေ Just Laws တွေလည်း ရှိဦးမှ ဖြစ်မှာပါ ။
အဲဒီအပြောင်းအလဲကောင်းကို ရအောင်ဖန်တီးရာမှာ ကျမတို့မှာ အဘက်ဘက်က အကူအညီလိုပါတယ် ။ ဒီတော့ အခုလို စကားပြောခွင့်ရတာလေးကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး ပြောပါရစေ……… မြန်မာပြည် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြန်လည်တည်ဆောက် ရာမှာ ကျမတို့ကို လူကြီးမင်းတို့က ကူညီပေးကြပါ ။ ကျမတို့မှာ ကျွမ်းကျင်တဲ့ တရားသူကြီးတွေလိုပါတယ် ။ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ရှေ့နေတွေလိုပါတယ် ။ ကျမတို့တက္ကသိုလ်တွေမှာ ဥပဒေကျောင်းကောင်းကောင်းတွေ လိုနေပါတယ် ။
လူတွေက ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးတွေကို အရမ်းလိုချင်ကြပေမယ့် တာဝန်တွေအကြောင်း ကိုတော့ အမြဲမသိချင်ကြပါဘူး ။ မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီကိုတည်ဆောက်ချင်ရင် အဲဒီနှစ်ခုအပေါ်မှာ ညီတူညီမျှ အလေးပေးမှ ဖြစ်မှာပါ ။ ဥပဒေရဲ့ အကာအကွယ်ပေးမှုကို လိုချင်တဲ့ နိုင်ငံသားတွေဟာ သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း ဥပဒေကို စောင့်ထိန်းဖို့လိုပါတယ် ။ ဒါတွေအားလုံးကိုသာ ရအောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် မြန်မာပြည်ဟာ တကယ့်ကို သေချာတဲ့ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ကို ရောက်နေပြီဆိုပြီး စိတ်ချလို့ ရပြီလို့ ကျမထင်ပါတယ် ။
နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင် ဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတဲ့ ဒဏ်ကို ကျမတို့ ခံကြရပါတယ် ။ ဆိုလိုတာက နောက်ထပ်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာ ဘယ်တော့မှ သေချာရေရာခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး ။ ဒါဟာ မြန်မာပြည်ရဲ့ တကယ်ဖြစ်နေတဲ့ အမှန်တရားတစ်ခုပါ ။ ” မနေ့ညက ဘယ်သူ့ကိုများဖမ်းသွားပြီလဲ ” လို့ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင် နေ့စဉ်နေတိုင်း ကျမတို့ ပါတီဝင်တွေ အချင်းချင်း မေးခဲ့ရပါတယ် ။ ဖမ်းတာတွေက များသေားအားဖြင့် ညသန်းခေါင်လောက်မှာ လာလာဖမ်းကြတာကို...
fb Ko Nay Myo
Crony ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို အင်္ဂလိပ် မြန်မာ အဓိဓာန်မှာ မြန်မာဘာသာဖြင့် ဘယ်လို ဖော်ပြထားသည် ဖြစ်စေ အဘိဓာန်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်သူလူထုက နားလည် လက်ခံကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဝေါဟာရတွေရဲ့ ၀ိပ္ပလ္လာသ, သဘောကို လိုက်ကာအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးနဲ့ နားလည် နေကြပြီး အဲဒီလို နားလည်မှုကလည်း ကောင်းတဲ့အမြင်နဲ့ နားလည်တာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကတော့ သေချာပါတယ်။ အဲဒီတော့ အရှိကို အရှိအတိုင်း အမှန်ကို အမှန်အတိုင်း တင်ပြရမယ်ဆိုရင် Crony တွေရဲ့အပေါ်မှာ ပြည်သူတွေက အမြင် မကြည်မလင် ဖြစ်နေမှုဟာ ကြာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ Crony တွေနဲ့ ပတ်သက်လာရင် အောက်ခြေမှာ ရှိကြတဲ့ ဘယ်အလွှာကမှ ထောက်ခံ ပြောဆိုတာ မကြားရဖူးပါဘူး။ ဒီလို ဖြစ်ရတာကလည်း Crony တွေနဲ့ ပတ်သက်လာရင် သူတို့ရဲ့ မောက်မာမှု တွေနဲ့တကွ ဆင်းရဲသား ပြည်သူတို့အပေါ် ငဲ့ကွက်ခြင်းမရှိမှုစတဲ့ ချီးမွမ်းဘွယ် မရှိတဲ့ သတင်းများကသာ ပြည်သူတွေရဲ့ အကြားမှာ ပျံ့နှံ့နေခဲ့မှုကလည်း ကာလ အတော်ကြာနေလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်မှာ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု ဥပဒေသစ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒီဥပဒေ ကို လွှတ်တော်တွင်းရှိ Crony အုပ်စုနဲ့ သူတို့နဲ့ ပတ်သက်ရာ ပတ်သက်ကြောင်း ဖြစ်နေသူတို့ ပူးပေါင်းကာ ဦးဆောင် ရေးဆွဲကြပြီး ပြည်တွင်း Crony တွေ သာလျှင် ပိုမို အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေလိမ့်မယ် လို့ မီဒီယာတွေကနေတစ်ဆင့် သိကြရတဲ့ အခါ အလတ်စား အငယ်စား လုပ်ငန်းရှင် များကစပြီး ပြည်သူတွေ အတွင်းမှာ Crony တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အဆိုးမြင်မှု တွေ ပိုမို ပျံ့နှံ့လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းကတော့ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ ရှိလာမှ ပြည်တွင်း ဈေးကွက်မှာ ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ် လာပြီး ပြည်သူတွေအတွက် အခွင့် အလမ်းကောင်းတွေ ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ် လို့ မျှော်လင့်ထားကြလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ ပြည်တွင်း Crony တွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို သိသာစွာ ရှေ့ရှုနေတဲ့ အချက်အချို့အား ဖယ်ရှားပြီး နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေကို အတည်ပြုခဲ့သည့် တိုင်အောင် ဒီဥပဒေ ရေးဆွဲမှု အခြေအနေ ကို ပြည်သူတွေအတွင်းမှာ မေးခွန်း ထုတ်စရာ အများအပြား ရှိနေပါတယ်။
အမှန်အားဖြင့် တင်ပြရရင် ၁၉၈၈ ခု နောက်ပိုင်း အာဏာရှင် အစိုးရ လက်ထက်အတွင်း ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံ မှာ Crony တွေ ပေါ်ပေါက်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Crony တွေဟာ အာဏာရှိ သူတွေနဲ့ သွေးသား တော်စပ်သူတွေ သော်လည်းကောင်း၊ ပုဂိ်္ဂုလ်ရေးအားဖြင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လွန်းသူတွေ သော်လည်း ကောင်း ဖြစ်ကြပါတယ်။ Crony တွေရဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေဟာ အာဏာရှင် အစိုးရရဲ့ အာဏာရှိ သူတို့နဲ့ တိုက်ရိုက် အားဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ သွယ်ဝိုက်၍ သော်လည်းကောင်း ပတ်သက်နေခဲ့ကြ ပါတယ်။ အာဏာရှင်အစိုးရရဲ့ နှစ်နှစ်ဆယ်နီးပါး မျှကြာအောင် အုပ်ချုပ်မှု ကာလအတွင်း နိုင်ငံအတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှု နည်းပါးတဲ့ စီမံကိန်းတွေနဲ့ Crony တွေဟာ သူတို့ရဲ့ စီးပွားဖြစ်ထွန်းမှုများနဲ့ စီးပွားရေး အခွင့် အလမ်းတွေကို အဆမတန် ကြီးထွား အောင် လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အာဏာရှင် အစိုးရ လက်ထက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး အခွင့်အလမ်းများကို မြန်မာ Crony တွေ ခွဲဝေရယူကြပုံကတော့ ၁၉ ရာစုနှစ်အတွင်းက အနောက် ဥရောပ နယ်ချဲ့တို့ အာဖရိကတိုက်ကို ခွဲဝေယူကြပုံ နဲ့ အလားသဏ္ဍာန် တူတယ်လို့ ပြောနိုင် ပါတယ်။
နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး ကဏ္ဍတွေဖြစ်တဲ့ ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း၊ စွမ်းအင်၊ သတ္ထု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်း စတဲ့ ကဏ္ဍစုံ၊ ရေပေါ်ရေအောက်၊ မြေပေါ် မြေအောက်၊ နိုင်ငံအနှံ့ Crony တို့ရဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဒီလိုနိုင်ငံအနှံ့ Crony တို့ရဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေရှိနေလို့ ဒေသခံတွေ အလုပ် အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေ ရကြတယ်။ ၀င်ငွေတွေ တိုးတက်ကြတယ်ဆိုတဲ့ အခြေ အနေက နည်းပါးပြီး Crony တို့နဲ့ ဒေသ ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တို့ရဲ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုတွေကြောင့် လယ်ယာမြေ လက်လွတ်ဆုံးရှုံး နစ်နာမှုတွေနဲ့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ပျက်ယွင်းမှုတွေကြောင့် ဒေသခံ ပြည်သူလူထုဟာ အကျပ် အတည်းတွေ တွေ့ကြရပြီး ဒုက္ခဆင်းရဲ ရောက်တာတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ သာဓက တစ်ခုအနေနဲ့ တင်ပြရရင် လက်ရှိအစိုးရ အဖွဲ့သစ် လက်ထက်မှာ ဖြေရှင်းလို့ မပြီး နိုင်သေးတဲ့ တောင်သူ လယ်သမားတွေ လယ်ယာမြေ ဆုံးရှုံးမှု ပြဿနာတွေဟာ ယခင် အစိုးရဟောင်း လက်ထက်က ပေါ်ပေါက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပြဿနာတိုင်းဟာ Crony တွေကြောင့် ဖြစ်နေရတာလို့ သုံးသပ်သူ အများအပြား ရှိနေတာ ကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ နိုင်ငံအတွင်း ဒေသ အများအပြားမှာ ပြဿနာတွေ ဖြစ်ပေါ်နေတာ ဖြစ်လို့ ယခုအခါ လွှတ်တော်က ဒီပြဿနာတွေ ပြေလည် စေရေးအတွက် ကော်မရှင်ဖွဲ့ပြီး စုံစမ်းဖို့ ပြင်ဆင်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အစိုးရဟောင်း လက်ထက်မှာ အာဏာရှိသူတွေနဲ့ ပတ်သက်နေမှုတွေ ကြောင့် Crony တွေဟာ အခွင့်ထူးခံတွေ အဖြစ်နဲ့ ဥပဒေအထက်မှာ ရှိနေတဲ့ လူတန်းစား ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Crony တို့ရဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ နိုင်ငံအတွင်းမှာ ပျံ့နှံ့နေတာနဲ့အတူ Crony တို့ရဲ့ အမှုထမ်း များ လက်ရင်း လက်ဖျား လက်ဝေခံများ ဟာလည်း နိုင်ငံအနှံ့ ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ Crony တို့ရဲ့ အရှိန်အ၀ါ ကြီးမား လွန်းတာကြောင့် Crony တို့နဲ့ ပတ်သတ် လာရင် အစိုးရ၀န်ထမ်း အဆင့်ဆင့်တွေ ကလည်း အလျှော့ပေး ဆက်ဆံကြရပါ တယ်။ အကျိုးဆက် အနေနဲ့ကတော့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု ပိုမိုအားနည်း လာတာတွေ၊ အဂတိလိုက်စားမှု ပိုမို များပြားလာတာတွေ ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့် လက်ရှိအစိုးရ လက်ထက်မှာ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးမှုပြဿနာ၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု အားနည်းတဲ့ ပြဿနာနဲ့ အဂတိ လိုက်စားမှု ပိုမိုများပြားလာတဲ့ ပြဿနာ တွေမှာ Crony တွေမှာလည်း တာဝန် ရှိတယ်လို့ ပြောရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေး စနစ် ပြောင်းလဲနိုင်ရေးအတွက် ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အခါ Crony အချို့နဲ့ အာဏာရှင် အစိုးရဟောင်း လက်ထက်က အာဏာရှိခဲ့သူ အများစု တို့ဟာ လွှတ်တော်တွေမှာ ပြည်သူ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေ ဖြစ်လာကြပါတယ်။ အဲဒီလို ဖြစ်လာရတာကတော့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ဖြစ်လာကြတာ ဖြစ်ပါ တယ်။ ဒီလို Crony အချို့နဲ့တကွ သူတို့နဲ့ နှီးနွှယ် ပတ်သက်နေတဲ့ အာဏာရှင် အစိုးရဟောင်း လက်ထက်က အာဏာ ရှိသူ အများစုတို့ဟာ ဥပဒေပြု လွှတ်တော် မှာ အဓိကအင်အားလို ပါဝင်လာ သောကြောင့် စောစောပိုင်း ကာလတွေမှာ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး ပေါ်လစီကို ပြည်သူတွေက ပြည့်ဝစွာ ယုံကြည်မှု မရှိခဲ့ကြပါဘူး။ နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးစနစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ အတွက် လွှတ်တော်များနဲ့တကွ အစိုးရ အဖွဲ့သစ်တို့ ပေါ်လာကာစ စောစောပိုင်း ကာလတွေမှာ လွှတ်တော်တွေနဲ့ အစိုးရ အဖွဲ့သစ်တို့မှာ ပါဝင်လာကြတဲ့ Crony အချို့နဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ဝင် အချို့ဟာ အာဏာရှင် အစိုးရလက်ထက်က ပုံစံ အတိုင်း ပြည်သူတွေအပေါ်မှာ စီးမိုးတဲ့ အပြောအဆို အနေအထားများနဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ဦးရဲ့ မျက်နှာစာမှာ မဖုံးနိုင် မဖိနိုင် ခပ်ပြောင်ပြောင် ရပ်ပြခဲ့တာကို လည်း တွေ့ကြရပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သော အပြောအဆိုနဲ့ လုပ်ရပ်များကြောင့် ထိုပုဂိ်္ဂုလ်များကို လည်းကောင်း၊ လွှတ်တော်များနဲ့ အစိုးရအဖွဲ့သစ် အတွင်းမှာ ပါဝင်နေကြတဲ့ Crony များနဲ့ အာဏာရှင် အစိုးရ လက်ထက်က အာဏာရှိသူ အချို့ကို လည်းကောင်း၊ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးကို မလိုလားတဲ့ ရှေးရိုးစွဲများ နောက်ကြောင်း ပြန်လှည့်မည့် သူများအဖြစ် ပြည်သူတွေက သတ်မှတ် ခဲ့ကြပြီး ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် သောက ပွားခဲ့ကြရပါတယ်။
အဲဒီလို ပြည်သူတွေရဲ့ သောကကို သိရှိတဲ့အတွက် ၁-၃-၂၀၁၂ နေ့က ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်မှာ သမ်္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်က အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းမှာ ခေါင်းမာဂိုဏ်း အပျော့ဂိုဏ်းဆိုတာ မရှိပါ ဘူးလို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်လည်း အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းက ရှေးရိုးစွဲဝါဒီတွေကို ချန်ထားခဲ့မယ်လို့ သမ္မတကြီး က မေလ အတွင်းမှာ ကြေညာခဲ့ပြီး စက်တင်ဘာ လဆန်းမှာ အစိုးရအဖွဲ့ကို အကြီးအကျယ် ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ ခြင်းဖြင့် မေလအတွင်းက ပြောကြားခဲ့မှုကို သမ္မတကြီးက အကောင် အထည်ဖော်ခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ပြည်ထောင်စု အစိုးရ အဖွဲ့အတွင်းမှာ ယခုကဲ့သို့ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းဟာ ပြည်သူ တွေ သုံးသပ်ခဲ့ကြတဲ့အတိုင်း ပြည်ထောင် စု အစိုးရ အဖွဲ့အတွင်းမှာ သဘောထား တင်းမာသူများနဲ့ ပျော့်ပြောင်းသူများ (ခေါင်းမာဂိုဏ်း အပျော့ဂိုဏ်း) ရှိနေတယ် ဆိုတာ ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းက အနေအထား ဖြစ်ပြီး အုပ်ချုပ်ရေး မဏ္ဍိုင်ရဲ့ အကြီးအကဲ ဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံတော် သမ်္မတကြီးက သမ္မတရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့် အခွင့်အာဏာအရ ဆောင်ရွက် ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ လွှတ်တော်တွေ အတွင်းမှာလည်း သဘောထား တင်းမာ သူများနဲ့ ပျော့ပြောင်းသူများ (ခေါင်းမာ ဂိုဏ်း၊ အပျော့ဂိုဏ်း) ဆိုပြီး ရှိနေတာကို တဖြည်းဖြည်း ပေါ်လွင်စွာ မြင်နေရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ အများ အကျိုးစီးပွားနဲ့ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားတို့ စပ်ယှဉ်တဲ့ ကိ်စ္စရပ်တွေမှာ ပိုမိုပေါ်လွင်စွာ မြင်တွေ့ရပါတယ်။ သို့သော် အစိုးရအဖွဲ့ မှာကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်လို့ မရနိုင်ပါဘူး။ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ် ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ် အရ ပြည်သူတွေက ရွေးချယ်ထားတဲ့ သဘောဖြစ်လို့ ဒီပုဂိ်္ဂုလ်တွေ ကိုယ်စား လှယ် ဖြစ်လာမှုဟာ၊ မဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူ တွေနဲ့ သက်ဆိုင်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြည်သူ့ ကိုယ်စားလှယ်ဆိုတဲ့ အဖြစ်ကို မေ့လျော့ပြီး ပြည်သူတွေရဲ့ အသံကို နားမထောင် ပြည်သူတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွား ကိုလည်း ရှေးမရှု ကိုယ်ကျိုးစီးပွား ရှေ့တန်းတင်နေတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ တကွ အပေါင်းပါ ဖြစ်နေတဲ့ ကိုယ်စားလှယ် တွေကို နောက်တစ်ကြိမ် လွှတ်တော်ထဲ မရောက်အောင် နောက်မှာ ချန်ထားခဲ့ဖို့ ကတော့ မဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူတွေရဲ့ တာဝန် သာ ဖြစ်ပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
(ပြည်သူ့ခေတ်၊ အတွဲ ၃၊ အမှတ် ၁၁၃) —
တင်ပြသူ ကိုကိုကျော် အချိန် 11:16 PM0ယောက် အကြံပြုထားပါသည်
ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်အဆင့်ဝင် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် – အပိုင်း(၁)(၂)
ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်အဆင့်ဝင် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် By ရွှေပြည်စိုး
ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်အဆင့်ဝင် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဟုဆိုသည်နှင့် မည်သူဖြစ်မည်ကို ချက်ချင်းသိမည်ဟု ယုံကြည် ပါသည်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည် ၂၁ ရာစု မြန်မာ့သမိုင်းတွင် တစ်ဦးတည်းသောကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်လ်ဆုရှင် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် မြန်မာ့လူ့အခွင့်အရေးခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ အဓိကရှိအပ်သည့်အ ရည်အချင်းများမှာ ….
၁။ ဉာဏ်ပညာ အရည်အချင်း
၂။ နိုင်ငံချစ်စိတ် မျိုးချစ်စိတ်
၃။ မိမိအကျိုးထက် နိုင်ငံအကျိုးကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်စိတ် စသည်တို့ရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သည်ထိုကဲ့သို့သောအရည်အချင်းနှင့် ပြည့်စုံသည့်အပြင် ကိုယ်ကျိုးစွန့်၊အနစ်နာခံ စည်းစိမ်ဥစ္စာစွန့်၊ မိသားစုစွန့်၊ နောက်ဆုံး အသက်ကိုပါစွန့်ရန် ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသူဖြစ်သည်။ ဤအချက်များသည် အခြားသောကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များထက် သာလွန်သော အချက်များဖြစ်ပါသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မည်သို့ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းနိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်အဆင့်ဝင်ဖြစ်လာသည်ကိုမပြောမီ ဒေါ်စု၏ မိဘ နှစ်ပါးအကြောင်းကို ရှေးဦးစွာအကျဉ်းချုံး၍တင်ပြပါမည်။
● ဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ဖခင်သည် တပ်မတော်ဖခင် လွတ်လပ်ရေးဗိသုကာ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအဖြစ် မြန်မာ သာမက ကမ္ဘာကပါ အသိအမှတ်ပြုခံရသူဖြစ်သည်။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝကတည်းက ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂဥက္ကဌ (တကသ) ၏အာဘော်ဖြစ်သော အိုးဝေမဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာ၊ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂ (ဗကသ) ဥက္ကဌအဖြစ် တာဝန်ထမ်း ဆောင်ခဲ့သည်။ ကျောင်းသားဘဝကနေ နိုင်ငံရေးလောကသို့ကူးပြောင်းရာတွင်လည်း သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းဦးဆောင်သော ဒို့ဗမာအစည်း အရုံး (၁၉၃၈-၄၀)၊ ဗမာ့ထွက်ရပ်ဂိုဏ်း (၁၉၃၉ – ၄၀) အတွင်းရေးမှူးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ဖဆပလပါတီ တည်ထောင်ရာတွင်လည်း ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးအတွက် စွမ်းစွမ်းတမံဆောင်ရွက်မှုများကြောင့် ၁၉၄၃ တွင်ဂျပန် ဧက ရာဇ်ဘုရင် Akihito က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအား ဂျပန်သို့ဖိတ်ခေါ်ပြီး the Order of The Rising Sun ဘွဲ့ကိုချီးမြှင့်ခဲ့သည်။
● မိခင် ဒေါ်ခင်ကြည်
ဒေါ်ခင်ကြည်သည်မွန်မြတ်သော သူနာပြုအလုပ်ဖြင့်လုပ်ကိုင်ရင်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် ၁၉၄၂ ခုစက်တင်ဘာလတွင် အိမ်ထောင်ပြု သည်။ ဒေါ်ခင်ကြည်သည် ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကွယ်လွန်ပြီးနောက် ၁၉၆၀ ပြည့် မေလတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံ အ မတ်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ခံရသည်။ ဇွန်လတွင် နီပေါနိုင်ငံဆိုင်ရာသံအမတ်ကြီးအဖြစ် ပူးတွဲတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသည်။
ဒေါ်ခင်ကြည်သည် မြန်မာအမျိုးသမီးလောကတွင် ပထမဆုံးနှင့်တစ်ဦးတည်းသော အမျိုးသမီးသံအမတ်ကြီအဖြစ် မော်ကွန်းတင်ခံရပါ သည်။ ၇ နှစ်မျှ တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီး ၁၉၆၇ ခု ဇွန်လတွင် အငြိမ်းစားယူခဲ့သည်။
ဒေါ်ခင်ကြည်သည်ပြည်တွင်း၌ မွန်မြတ်သောသူနာပြုလုပ်ငန်းများနှင့် ပရဟိတလုပ်ငန်းများကို စေတနာသန့်သန့် ကိုယ်ကျိုးမဖက်ဘဲလုပ် ဆောင်မှုများကြောင့် ၁၉၄၇-၅၃ တွင် မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး၊ ညွှန်ကြားရေးဝန်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၁၉၅၃ -၅၈ တွင် ပြည်ထောင် စုမြန်မာနိုင်ငံ လူမှုဝန်ထမ်းကောင်စီ၊ မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးကျန်း မာရေးနှင့် ပြည်ရေးပြည်ရာအဖွဲ့၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အ မျိုးသမီးအသင်းများကောင်စီ၊ ဒီမိုကရေစီသဘောတရား တိုးတက်ပြန့်ပွားရေးအသင်း စသည့်အသင်းအဖွဲ့များ၏ဥက္ကဌ အဖြစ်လည်းကောင်း မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးကင်းထောက်အသင်း၏ ကင်းထောက်ချုပ်၊ မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုတင်ကားတပ်ဖွဲ့ဝင် အမျိုးသမီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ရာမာ ခရစ်ရှနာသာသနာပြုဆေးရုံနှင့် စာကြည့်တိုက်ဒုဥက္ကဌစသည့်တာဝန်များကိုလည်း ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
ဒေါ်ခင်ကြည်သည်နိုင်ငံ့အကျိုးပြည်သူ့အကျိုးများကို စွမ်းစွမ်းတမံဆောင်ရွက်မှုများကြောင့် ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ်တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက မြန်မာမိခင်ဘွဲ့၊ ၁၉၅၁ တွင် နိုင်ငံတော်အစိုးရက မဟာသီရိသုဓမ္မဘွဲ့၊ ၁၉၅၅ တွင် ယူဂိုစလားဗီးယားနိုင်ငံက မာရှယ်တီးတိုးယူဂိုစလပ်ကြယ် (ဒုတိယအဆင့်) နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံဥသျှောင်အဖွဲ့က နိုဘယ်အော်ဒါဘွဲ့ (ဝါ) အမြင့်မြတ်ဆုံးဆုတံဆိပ်တို့ကို ချီးမြှင့်ခြင်ခံခဲ့ရပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နိုင်ငံ့အကျိုး ပြည်သူ့အကျိုးများကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသော ဂုဏ်သိက္ခာရှိ မိဘနှစ်ပါးမှဆင်းသက်လာသူဖြစ်၍ ဒေါ်စုသည်လည်း မိဘနှစ်ပါး၏ မွန်မြတ်သောလုပ်ငန်းများကို သမိုင်းပေးတာဝန်တရပ်အနေဖြင့် ယနေ့တိုင်ဆက်လက်ထမ်းဆောင်လျှက်ရှိပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မည်သို့ကမ္ဘာထိပ်တန်းနိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင် အဆင့်ဝင်ဖြစ်လာသည်မှာ အောက်ပါအကြောင်းအချက်များက အ ထောက်အကူပြု ပံ့ပိုးမှုများကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း ဆက်လက်ရှင်းပြပါမည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ …
၁။ ပညာအရည်အချင်းနှင့် ဘာသာစကား
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ပညာအရည်အချင်းကကမ္ဘာထိပ်တန်းနိုင်ငံခေါင်းဆောင်အဆင့်ဝင်စေခဲ့ပါသည်။ ဒေါ်စုသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူး ဒေလီမြို့ရှိ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရပ်ကို သင်ယူခဲ့သည်။ (၁၉၆၂-၆၃) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဒဿနိကဗေဒ၊ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ၊စီပွားရေး ပညာရပ်များဖြင့် ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (B.A.) ကို Oxford University St Hugh’s College မှ ရရှိသူဖြစ်ပါသည်။ (၁၉၆၄-၆၇) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုတက္ကသိုလ် အရှေ့တောင်အာရှလေ့လာရေးစင်တာတွင် ဧည့်ပညာရှင်အဖြစ် ဆည်းပူးခဲ့သည်။ (၁၉၈၅-၈၆)
ဘာသာစကားအရ အင်္ဂလိပ် ပြင်သစ် ဂျပန်ဘာသာစကားများကို ကောင်းစွာရေးပြောနိုင်သူ လည်းဖြစ်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဘာသာရပ်အမျိုးမျိုးကိုသင်ယူထားသည်ဖြစ်၍အလုပ်လုပ်ရာ တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည်ဘာသာရပ်အမျိုးမျိုးကိုသင်ယူထားသည်ဖြစ်၍ အလုပ်လုပ်ရာတွင် အလွန်အလွန်အဆင်ပြေပါသည်။ ရှေးဦးစွာလန်ဒန်တက္ကသိုလ်အာရှအရှေ့ပိုင်းအာ ဖရိကသုတေသနဌာနတွင်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာပညာရပ်များကိုကူညီသင်ကြားပေးကြောင်း (၁၉၆၈) အမေရိကန် နယူးယောက်မြို့ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းဝန်များရုံး၏အုပ်ချုပ်မှုနှင့် ဘတ်ဂျက်မေးခွန်းများဆိုင်ရာအကြံပေးကော်မတီတွင် လက်ထောက်အတွင်းရေးမှူးအဖြစ်၎င်း (၁၉၆၉-၇၁)၊ ဘူတန်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် သုတေသနအရာရှိအဖြစ်၎င်း (၁၉၇၂)၊ အောက်စဖို့တက္ကသိုလ် ဂါးဒီးယန်းစာကြည့်တိုက် တွင်တာဝန်ခံအဖြစ်၎င်း (၁၉၇၅-၇၇) စသည့်နှစ်များတွင် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏စိတ်ဓာတ်သည် ပျော့ပြောင်းသလောက်ခိုင်မာသည်ကိုတွေ့ရသည်။ “ပျော့လျှင်ဖယောင်း မာလျှင်သံချောင်း” စ ကားပုံအတိုင်း ပျော့လျှင်အလွန်ပျော့၍ မာလျှင်အလွန်မာတတ်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည်သူများအပေါ် သနားကြင်နာကိုယ်ချင်းစာစိတ် ရှိသည်။ရိုးသားဖြူစင် ဖြောင့်မတ်သည်။ သူတပါးအပေါ်လိမ်ညာ လှည့်စား လက်တလုံးခြားမလုပ်တတ်။ ဒုက္ခရောက်နေသူများကိုကူညီကယ်တင်လိုစိတ် အမြဲတမ်းရှိသည်။ အထင်ရှားဆုံးသာဓကမှာ – ဒုက္ခရောက်နေသောအမေရိကန်နိုင်ငံသား John WilliamYeattaw ကို၂၀၀၉ခုနှစ် မေလဆန်းကကယ်တင်မိ၍ ဒေါ်စုမှာ အိမ်အကျယ်ချုပ် လွတ်ခါနီးမှ သက်တမ်းတနှစ်ခွဲထပ်တိုးခံရခြင်းသည် ဒေါ်စု၏ ဒုက္ခသည်အပေါ်သနားကြင်နာမှု၏ သာဓကတခုဖြစ်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏စိတ်ဓာတ်သည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်ပတ်သက်လျှင် ပျော့ပြောင်းသော်လည်း တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးအတွက်ဖြစ် လျှင် ယောက်ျားကြီးများထက်၊ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများထက် စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာသည်။ မည်သူမျှ မိမိ၏မိသားစုများကို မစွန့်လွှတ်နိုင် မစွန့် လွှတ်ရက်ကြပါ။ သို့သော်ဒေါ်စုသည် မိသားစုများကိုလည်း စွန့်လွတ်နိုင်သည်၊ တစ်ယောက်တည်းနေထိုင်ပြီးမည်သူနှင်မျှမတွေ့ရ၊ စကားမ ပြောရ မည်သည့်နေရာသို့မျှ မသွားရလည်း မည်သို့မျှတုန်လှုပ်ချောက်ခြားခြင်းမရှိ။စိတ်အားမငယ်၊ စိတ်ဓာတ်မကျ၊ ပကတိအကောင်းအ တိုင်းဖြစ်သည်။ သီလသမာဓိရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု ယူဆရပါသည်။ ဤအချက်များသည် ဒေါ်စု၏ ခိုင်မာသောစိတ်ဓာတ်ကိုပြသ ခြင်းဖြစ်သည်။
၄။ ရက်ရောသော အလှူရှင်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်သည့်အလျောက် လှူတန်းရာတွင် အလွန်ရက်ရောသည်။ စံတင်လောက်ပါသည်။၂၁ ရာစု မြန်မာ့သမိုင်းတလျောက်လုံး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လောက် အလှူရက်ရောသူမတွေ့ဘူး မကြားဘူးသေးပါ။ နဝတ နအဖခေတ်တ လျောက်လုံးအချမ်းသာဆုံးဟု မြန်မာလူထုကယုံကြည်ထားသည့် နအဖဥက္ကဌကြီး ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီသန်းရွှေ၏လူယုံတော်ဖြစ်ဟုလည်း စီးပွား ရေးသမားများက အသိအမှတ်ပြုထားသည့် ဦးတေဇက အလှူအတန်းများများလှူသည်ဟု တခံမှမကြားဖူးပါ။ ဒေါ်စုလှူသည့်အရေအတွက်၏ ၂၅% ခန့်ပင်မရှိဟု ယူဆရသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အလှူရက်ရောမှုကို ကြည့်ပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည်နအဖစစ်အစိုးရကိုလက်နက်မပါ၊အကြမ်းမဖက်သောနည်းဖြင့်ဒီမိုကရေစီနှင့်လူ့အခွင့်အရေးရရှိရေးအတွက်ကိုယ်ကျိုးစွန့်အနစ်နာခံကာတိုက်ပွဲဝင်နေမှုကို ထောက်ခံအားပေးသောအားဖြင့်နိုင်ငံတကာမှ ချီးမြှင့်သောဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုများတွင် ငွေ သားနှင့်တွဲပါသောဆုများလည်း ပါဝင်ပါသည်။ ငွေသားနှင့်တွဲပါသော ပထမဆုံးဆုသည် ၁၉၉၁ ခုနှစ်အတွက် နော်ဝေနိုင်ငံမှချီးမြှင့်သည့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၃ သန်း (U.S. $1.3 millions) ပါသော နိုဘယ်လ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆု (Nobel Peace Prize) ဖြစ်သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်က ထိုငွေများကို ၎င်း၏ကိုယ်ကျိုးအတွက်မသုံးဘဲ မြန်မာပြည်သူလူထုလိုအပ်လျက်ရှိသော ကျန်းမာရေးနှင့်ပညာရေးအတွက်အသုံးပြုမည်ဟုကမ္ဘာသိ ကြေညာခဲ့သည်။ ၎င်းပြင် လေ့လာမိသမျှ ငွေသားပါဆုများမှာ ၂၀၀၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလက UNESCO – Madanjeet Singh Prize U.S.$1,00,000၂၀၀၃ ခုနှစ် ဧပြီလက အမေရိကန်အခြေစိုက် Al Neuharth Free Spirit Award $1 million၊ ၂၀၀၆ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလက ဆွီဒင်နိုင်ငံအခြေစိုက် Olof Palm Prize (for 2005) U.S. $50,000၊ ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ မတ်လက အိန္ဒိယနိုင်ငံကာ လကတ္တားမြို့မှ နေတာချီ ဆူဘတ်စ်ချန်ဒရာဘို့စ်ဆု – အိန္ဒိယ ရူပီငွေ ၁ သိန်း၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ် မေလက တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံ ဆိုးလ်မြို့မှ Kim Dae Jung Award U.S.$ 10,000 တို့ဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း ချီးမြှင့်ပြီးသော ငွေသားမှာ U.S.$ 2,460,000 ဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။ (အ ထက်ဖော်ပြပါ ဆုချီးမြှင့်သူ စာရင်းနှင့်ငွေစာရင်းများမှာ ပြီးပြည့်စုံသည်ဟု မယူဆပါ။ လက်လှမ်းမမီ၍ မသိလိုက်သည်များလည်းရှိနိုင်ပါ သေးသည်။
အထက်ပါ ဆုငွေအဖြစ်ရရှိသောငွေများကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ကိုယ်ကျိုးအတွက်မသုံးဘဲ တိုင်းသူပြည်သားများလိုအပ်လျက်ရှိ သောကျန်းမာရေးနှင့် ပညာရေးတို့အတွက် အသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နိုင်ငံတကာကချီးမြှင့်သည့်ဆုငွေများကိုသာ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးအတွက်လှူဒါန်းသည်မဟုတ်၊ ပြည်တွင်း ၌လည်း အခါအားလျော်စွာ ပေးကမ်းလှူဒါန်းလျက်ရှိသည်။ မကြာသေးမီကဖြစ်ပွားခဲ့သောပုသိမ်ရေဘေးဒုက္ခသည်များအား ငွေကျပ်သိန်း၂၀ သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။
(ဒုတိယပိုင်းကို ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ဆက်လက်ဖေါ်ပြပါမည်)
၅။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် သူတော်စင်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်ဖြစ်သည့်အလျောက် အနန္တောအနန္တငါးပါးကို ရိုသေလေးစား ဦးထိပ်ထားလျက် ရှိ နေပါသည်။ ဒေါ်စုသည် နိုင်ငံတကာမှ ဆုများမချီးမြှင့်မီကပင် ဆရာတော်သံဃာတော်များအား နေအိမ်သို့ ပင့်ဖိတ်၍လည်းကောင်း၊ ကျောင်းများသို့သွား၍လည်းကောင်း လှူဖွယ်ဝတ္ထု အစုစုတို့ကို ဆက်ကပ်လှူဒါန်းလျက်ရှိသကဲ့သို့ ရပ်ဝေးရှိ ဆရာတော်များ သီတင်းသုံးရာ ကျောင်းများသို့လည်း သွားရောက်ဖူးမြော်လေ့ရှိပါသည်။ အထင်ရှားဆုံးမှာ မွန်ပြည်နယ်ရှိ သာမညဆရာတော်အား သွားရောက်ဖူးမြော်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
၂၁ ရာစု မြန်မာ့သမိုင်းတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဲ့သို့ အလှူရက်ရောသူ နောက်ထပ်တစ်ဦးတစ်ယောက်မျှမပေါ်ပေါက်နိုင်ဟုယုံကြည်ရပါသည်။ လောလောဆယ် စုဆောင်းမိသမျှ နိုင်ငံတကာမှချီးမြှင့်ထားသည့် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့ထူးဂုဏ်ထူးများနှင့် ဆုအသီးသီးစာရင်းများ ကို နောက်ပိုင်းတွင် သီးခြားဖော်ပြထားပါသည်။ ဆက်လက်ရှုစားနိုင်ပါသည်။
၆။ စံတင်လောက်သည့် ဝတ်စားဆင်ယင်မှု
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မြန်မာ့ရိုးရာဝတ်စားဆင်ယင်မှုသည် ၂၁ ရာစု မြန်မာ့သမိုင်း၏ စံနမူနာဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ပြည်ပရောက်မြန် မာအမျိုးသမီးများအတွက်လည်း ဒေါ်စုသည် စံနမူနာဖြစ်သည်။ ပြည်ပရောက် မြန်မာအမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှအပြင်သို့ထွက်တိုင်း မြန်မာ အမျိုးသမီးဝတ်စုံဝတ်ဆင်သူ အလွန်နည်းပါးသည်။ လူနည်းစုသာတခါတရံ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသွားသည့်အခါ မြန်မာအမျိုးသမီးဝတ်စုံ ကို ဝတ်ဆင်ကြသည်။ ကျန်အားလုံးသည် ဘောင်းဘီ (သို့မဟုတ်) စကတ်ကိုသာ ဝတ်ဆင်တတ်ကြသည်။ သို့သော် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သည် အိမ်မှအပြင်သို့ထွက်သည့်အခါတိုင်း မြန်မာအမျိုးသမီးဝတ်စုံဖြစ်သည့် ထမီနှင့်ရင်ဖုံးအင်္ကျီကိုသာ အစဉ်အမြဲဝတ်ဆင်သည်။ ထို့ပြင် အလုပ်သွားတိုင်း၊ ပွဲနေပွဲထိုင်သွားတိုင်း၊ အခြားအခန်းအနားများ သွားတိုင်း၊ ဘုရားသွား ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားသည့်အခါတိုင်းတွင် ထမီ၊ ရင်ဖုံးအင်္ကျီအပြင် ပုဝါကိုပါ အမြဲတမ်း လွှမ်းခြုံလေ့ရှိသည်။ အခုနောက်ဆုံး ပြည်ပခရီး (ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဥရောပ ၅ နိုင်ငံ) ထွက်ရာတွင်လည်း မြန်မာအမျိုးသမီးဝတ်စုံကိုသာဝတ်ဆင်ပြီး ပုဝါကို အမြဲတမ်းခြုံထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့၌ကျင်းပခဲ့သော ကမ္ဘာ့ စီးပွားရေးဖိုရမ်တွင်လည်းကောင်း၊ ဥရောပ ၅ နိုင်ငံတွင်ကျင်းပခဲ့သည့် အခမ်းအနားတိုင်းသို့တက်ရောက်၍ မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင်လည်းကောင်း ဒေါ်စုသည် မြန်မာအမျိုးသမီးဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်သည်ကိုသာတွေ့ရပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဝတ်စားဆင် ယင်မှုသည် ၂၁ ရာစု မြန်မာအမျိုးသမီးများ၏ စံနမူနာပင်ဖြစ်ပါတော့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မည်သူနှင့်မျှ နှိုင်းယှဉ်၍မရသည့် စွန့်လွှတ်၊ စွန့်စားခြင်းများကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် စစ်အာဏာ ရှင်စနစ်အောက်မှ လွတ်မြောက်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီစနစ်ပြည်လည်ထွန်းကားရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးများပြည်လည်ရရှိခံစားရရေးတို့အတွက် အ နစ်နာခံ၊ ကိုယ်ကျိုးစွန့်ပြီးလုပ်မှဖြစ်မည်ကို သိရှိသဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မိမိ၏ဂုဏ်သိက္ခာ၊ စည်းစိမ်ဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစွန့်၊ ကိုယ်ကျိုးစွန့်၊မိသားစုစွန့်၊ နောက်ဆုံး အသက်ကိုပါစွန့်ပြီးလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်မှာ ကမ္ဘာသိဖြစ်၍ အထူးရှင်းပြရန် လိုမည်မထင်ပါ။ အားလုံးအ တွက် တစ်ဦးတည်းအနစ်နာခံပြီး ဦးဆောင်မှုပေးခဲ့သည့်အတွက် ချီးကျူးပါသည်၊ ဂုဏ်ယူပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မည်သည့်အမျိုးသမီးကမှ ယှဉ်နိုင်စွမ်းမရှိသည့် ရဲစွမ်းသတ္တိရှိသူဖြစ်သည်။ယုံကြည်ချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း မကြောက်မရွံ့နောက်မတွန့်ဘဲ ပြီးစီးသည်ထိ လုပ်ဆောင်လေ့ရှိသည်။ မည်သို့သော အတားအဆီး၊ အန္တရာယ်ရှိသည်ဖြစ်စေ ထိုအတားအ ဆီးအန္တရာယ်များကို ရှောင်ကွင်း၍မသွားဘဲ ရဲရင့်တည်ကြည်စွာဖြင့် ရင်ဆိုင်ရဲသည့်သတ္တိရှိသည်။ ထိုသို့ ရဲရင့်သည့်သတ္တိရှင်သည် ဒေါ်စုမှ တပါး အခြားမရှိဟုပြောလျှင် မှားမည်မထင်ပါ။ အထင်ရှားဆုံးသာဓကများမှာ …
က။ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် မေလ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်အတွင်း ၁၉၈၉ ဇန္နဝါရီလ ၂၁ ရက်၊ နံနက်တွင် ပုသိမ်မြို့ ဝေဠုဝန်ကျောင်း တိုက် ရှိရာသို့သွားရန် NLD တိုင်းရုံးမှ ထွက်လာစဉ် လမ်းတွင် ဧရာဝတီတိုင်း တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်မြင့်အောင်၏ လက်နက်ကိုင်တပ်သားများက ကားနှင့်ဖြစ်စေ၊ ခြေလျင်ဖြစ်စေ မသွားရဟု တားမြစ်ခဲ့ကြသည်။ တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုးအတွက်ဆိုလျှင် မိမိအသက်ကို ပဓာနမထားသော ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်က “အကျဉ်းသားမှလွဲ၍ သွားချင်ရာကို သွားခွင့်ရှိသည်” ဟုဆိုကာ သူ့အားချိန်ရွယ်ထားသည့် စစ်သားများ၏ သေနတ် များ၊ လှံစွပ်များကြားမှ မတုန်မလှုပ်ဘဲ တည်ကြည်စွာ ဖောက်ထွက်သွားခဲ့သည်။
အသက်အန္တရာယ်ရှိမှန်းသိလျက်နှင့် မကြောက်မရွံ့ မတုန်လှုပ်ဘဲ ရဲရင့်တည်ကြည်စွာ ရင်ဆိုင်လိုက်ခြင်းသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ထူးခြား သောရဲစွမ်းသတ္တိပင်ဖြစ်သည်။
ခ။ ၂၀၀၃ ခုနှစ် အထက်မြန်မာပြည် စည်းရုံးရေး ခရီးစဉ်အတွင်း မေလ ၃၀ ရက်နေ့ည ဒီပဲယင်းအရပ်၌ နအဖ စစ်အစိုးရ၏ လျှို့ဝှက်စီမံချက်ဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဦးတင်ဦးတို့နှင့် NLD လူငယ်များအား လူရမ်းကားများက တုတ်၊ ဓား၊ လှံ စသည့် လက်နက်မျိုးစုံတို့ဖြင့် ဝိုင်းဝန်း တိုက်ခိုက်ချိန်တွင် မိမိအားကာကွယ်ပေးနေသော လူငယ်များအစား မိမိသာ အသေခံမည်ဆိုကာ ကားထဲမှ အတင်းပင်တိုးထွက်ခဲ့သည်။ လူငယ်များက ဒေါ်စုအား ကားထဲမှ ထွက်ခွင့်မပေးဘဲ ၎င်းတို့သာ အသေခံ၍ ကာကွယ်ပေးသွားခဲ့ကြသည်။
ကားထဲမှ ထွက်လိုက်သည်နှင့် သူ့အသက်ပါပျောက်သွားမည်ကိုသိလျက်နှင့် ကားထဲမှထွက်ရန် အတင်းကြိုးစားခြင်းသည် ဒေါ်စု၏ ထူးခြား သော ရဲစွမ်းသတ္တိပင်ဖြစ်သည်။ ချီးမွမ်းစရာ၊ ဂုဏ်ယူစရာ ဖြစ်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ကမ္ဘာ့ထိပ်နိုင်ငံ့တန်းခေါင်းဆောင် အဆင့်ဝင်ဖြစ်လာစေရန် အထောက်အကူပြုမှုများ၏ အဓိကအချက်သည် သန့်ရှင်းမွန်မြတ်သောစိတ်ထားဖြင့် တိုင်းပြည်အတွက် ကိုယ်ကျိုးစွန့်အနစ်နာခံခဲ့ကြသော မိဘ၊ ဘိုးဘွားများ၏ ဇာတိသွေးကြောင့်ဖြစ်သည် ဟုပြောနိုင်ပါသည်။
ထို့ပြင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အထက်တွင်ဖေါ်ပြပြီးဖြစ်သည့် ဉာဏ်ပညာအရည်အချင်း၊ စိတ်ဓါတ်၊ ရဲစွမ်းသတ္တိ၊ စွန့်လွှတ်စွန့်စားခြင်း …. စသည်များပါဝင်သကဲ့သို့ ဒေါ်စုရေးသားခဲ့သော စာအုပ်စာတမ်းများ၊ အင်တာဗျူးများ၊ မိန့်ခွန်းများ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကြောင်းရေး သားထုတ်ဝေသည့် နိုင်ငံခြားသားပညာရှင်များ၏ စာအုပ်များကလည်းများစွာအထောက်အကူပြုပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ ….
က။ ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရေးသည့်စာအုပ်များ
1. Let’s Visit Burma by Burke Pub Co, ……. 1985
2. Burma and India by India Institute of Advanced Study , Shimla …… 1990.
3. Aung San of Burma by Kiscadale Publication ….. 1991.
4. Freedom from Fear by Penguin Books …… 1993.
(ဤစာအုပ်ကို နယူးယောက်၊ အင်္ဂလန်၊ ကနေဒါ၊ သြစတြေးလျ၊ နယူးဇီလန်နိုင်ငံတို့တွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေသည်။ နော် ဝေ၊ ပြင်သစ်၊ စပိန် နိုင်ငံတို့တွင်မူ ၄င်းတို့ဘာသာသို့ပြန်ဆို၍ထုတ်ဝေကြာင်းသိရှိရပါသည်။)
5. Letters from Burma by Penguin Books ………. 1995.
6. လက်ရွေးစင်မိန့်ခွန်များ by La Haule Books…….. 1995
7. Voice of Hope by Published : Italy …………….. 2008
8. Let’s Visit Bhuton
9. Let’s Visit Napal Series by Burke Pub Co.
10. Aung San and Leaders of Asia Aeries.
(ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် “ လက်ရွေးစင်မိန်ခွန်းများ “ စာအုပ်မှလွဲ၍ ကျန်စာအုပ်အားလုံးသည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ရေးသားသောစာအုပ်များဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်လိုရေး အခြားစာအုပ်များရရှိနိုင်ပါသေးသည်။)
ခ။ ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကြောင်းရေးသည့် စာအုပ်များ
1. The Lady, Aung San Su Kyi , Nobel Laureate and Burma’s Prisoner by Barbara Victor …….. (1998)
2. Aung San Su Kyi : Standing Up for Democracy in Burma by Bettina Ling …… (Nov – 1998)
3. Aung San Su Kyi : Standing Up for Democracy in Burma by Bettina Ling …… (Sept – 1999)
4. Aung San Su Kyi by William David Thomas …… (July – 2004)
5. Aung San Su Kyi : Activist for Democracy in Myanmar by Judy L. Hasday ….. (Jan _ 2007)
6. Perfect Hostage: A life of Aung San Su Kyi , Burma’s Prisoner of Conscience by Justin Wintle …… (Mar – 2008)
7. Aung San Su Kyi : Fearless Voice of Burma by Whitney Stewart …….(Jun _2008)
8. Aung San Su Kyi by Frederic P.Miller …… (Jun – 2010)
9. Most Influentia; World Leaders , Vol – 8 and Aung San Su Kyi by Victoria Hockfield ……. (Mar _ 2011)
10. Aung San Su Kyi by Simon Rose …….. (Jul – 2011)
11. Aung San Su Kyi A Treatise by Amy Johnson (Jul – 2011)
12. Honorary Companions of the Order of Australia : Jacques Consteau, J RN Utzon, Aung San Su Kyi by Source Wikipedia …… (Sep – 2011)
13 . Aung San Su Kyi and Burma’s Struggle for Democracy by Bertil Lintner ….. (Oct – 2011)
14 . Aung San Su Kyi by Jesper Bengtsson ……… ( Mar – 2012)
15 . The Lady and the Peacock : The Life of Aung San Su Kyi by Peter Popham …. (Mar – 2012)
Foreword by Aung San Su Kyi Abhaya : Burma’s Fearlessness by James Mackay.
Forworded by Aung San Su Kyi …. (Dec _ 2011)
၁၀။ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဖြစ်ကြောင်း ထပ်လောင်းသက်သေထူ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နိုင်ငံတကာမှရောက်ရှိလာသည့် နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များ၊ထင်ရှားကျော်ကြားသည့် နိုင်ငံတကာဆိုင်ရာ အဖွဲ့အ စည်းကြီးများ၏ ခေါင်းဆောင်များနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းသည်ပင် ခေါင်းဆောင်အချင်းချင်း ဆွေးနွေးသည့်အဆင့်သို့ရောက်ရှိနေပြီဟု အ သိအမှတ်ပြုရာရောက်ပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ပြည်ပသို့ ခရီးထွက်သည်နှင့် ရောက်ရှိရာနိုင်ငံများမှကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းနိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်များ နည်းတူကြိုဆိုနှုတ် ဆက် ဧည့်ဝတ်ပြုကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
ပထမဦးဆုံးပြည်ပခရီးစဉ်အဖြစ် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ် ကျင်းပသည့် ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့သို့သွားရောက်ခဲ့သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံက ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်အား ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းနိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တဦးအနေဖြင့် ကြိုဆိုရန်စီစဉ်ခဲ့သော်လည်း အရပ်သားဟန်ဆောင် မြန်မာစစ်အ စိုးရ၏ဖိအားပေးမှုကြောင့် လူထုခေါင်းဆောင်တဦးအနေဖြင့်သာ ကြိုဆိုကြောင်းသိရပါသည်။
ဒုတိယခရီးစဉ်ဖြစ်သော ဥရောပ ၅ နိုင်ငံခရီးစဉ်များအတွင်း ရောက်ရှိရာနိုင်ငံများ က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းနိုင်ငံခေါင်း ဆောင်အဖြစ် လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ၊ ၀မ်းသာအားရကြိုဆိုကြသည်။ သမတများ၊ ၀န်ကြီးချုပ်များကိုယ်တိုင် ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြသည်ကိုတွေ့ရပါ သည်။ ဂုဏ်ယူ၍မဆုံး၊ ၀မ်းသာကြည်နူး၍မဆုံးပါ။
အထူးခြားဆုံးမှာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ လန်ဒန်မြို့ရှိ အထက်အောက်လွှတ်တော် ၂ ရပ်ပေါင်း Westminster ပါလီမန်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား မိန့်ခွန်းပြောကြားခွင့်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ဒေါ်စုအား စကားပြောခွင့်ပြုခြင်းသည် “အဆုံးစွန်ဂုဏ်ပြုမှု” တရပ်ဖြစ်သည်။
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကတည်းက ထိုပါလီမန် ၂ ရပ်တွင်စကားပြောခွင့်ရသည့် ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင် ၄ ဦးသာရှိသည်။ ၎င်းနောက်ပိုင်း စကားပြော ခွင့်ရသူများမှာ လက်ရှိ ဗါတီကန် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ၁၆ နှင့် အမေရိကန်သမတ ဘားရက်အိုဘားမားတို့ဖြစ်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သည် တတိယမြောက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်။
တဖန် ဗြိတိန်ဘုရင်မကြီး အယ်လစ်ဇဘက်ပြီးလျှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဒုတိယမြောက်မိန့်ခွန်းပြောခွင့်ရသည့် အမျိုးသမီးဖြစ် သည်။ (အာအက်ဖ်အေ ၊ ၂၁-၆-၂၀၁၂)
ဤသည်များကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်နေပြီဆိုသည်ကို ပြသရာရောက်နေပါ သည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လည်းကောင်း၊ မြန်မာလူမျိုးများအတွက်လည်းကောင်း ဂုဏ်ယူစရာအတိဖြစ်ပါသည်။
အထက်ပါ အထူးခြားဆုံးဖြစ်ရပ်များက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းနိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်ကြောင်း ထပ်လောင်းသက် သေထူလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ လက်နက်မပါ၊ အကြမ်းမဖက်သောနည်းဖြင့် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဉာဏ်ပညာ အရည်အချင်း၊ စိတ်ဓါတ်၊ ရဲစွမ်းသတ္တိ၊နှင့် စွန့်လွှတ်စွန့်စားခြင်း၊ ၎င်းတို့အပေါ် အခြေပြုပြီး ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်လ်ဆုအပါအ၀င် နိုင်ငံတကာမှ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆု ၁၂၀ ခန့်ချီးမြှင့်ခြင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရေးသားသောစာအုပ်များ (အင်္ဂလိပ်လို) နိုင်ငံတကာမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကြောင်းရေးသားသောစာအုပ်များ ကမ္ဘာပျံ့နေခြင်း၊ နောက် ဆုံး အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၏ အထူးခြားဆုံးဂုဏ်ပြုခြင်း စသည်တို့ကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင် တဦးဖြစ်နေ ပြီဖြစ်ကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။
(ကျန်ရှိနေသေးသည့် အပိုင်း (၃) တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား နိုင်ငံတကာမှချီးမြှင့်ထားသည့် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့ထူးဂုဏ်ထူး ၁၂၀ ခန့်ကို ယခုအပတ်အကုန် (wwekend) ဆက်လက်ဖေါ်ပြပါမည်)
တင်ပြသူ ကိုကိုကျော် အချိန် 10:47 PM0ယောက် အကြံပြုထားပါသည်
ဒေါ်စုကိုဘာဖြစ်လို့များလူတွေက သည်လောက်တောင်သဲသဲလှုပ်ဖြစ်နေကြရသလဲ။ ကဲကိုကဲလွန်းတယ်တဲ့လား (credit to Ko Aung Khaing)
ဒေါ် စု ကို ဘာ ဖြစ် လို့ များ လူ တွေ ကသည်လော က် တောင် သဲ သဲ လှုပ် ဖြစ် နေ ကြ ရ သ လဲ။
ကဲ ကို ကဲ လွန်း တယ် ....တဲ့လား။
နယူးယောက်မှာ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဒေါ်ရင်လတ် အင်္ဂလိပ်လို ပြောတော့ တနာရီမပြည့်ခင်အချိန်အတွင်း အင်္ဂလိပ်စာ အလုံး ၄၀ မှားလို့ဆိုပြီး FB မှာဝေဖန်ပြီး ပြောကြဆိုကြ ဒေါ်စုနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကဲ့ရဲ့ကြတယ်ဗျ။ တချို့ကလည်း ဒေါ်စုကို ချီးကျူးပါ.. သူများကိုတော့ မကဲ့ရဲ့ပါနဲ့ စသဖြင့့်် ပြောကြပါတယ်။ ကျနော်စဉ်းစားမိတယ်။ ဒေါ်စုကို မနှစ်သက်တဲ့သူ ဘက်က စိတ်ကူးယဉ်ပြီးတော့ပေါ့လေ။ ဘာဖြစ်လို့များ ဒေါ်စုကို လူတွေက (မြန်မာသာမက တကမ္ဘာလုံး) သည်လောက်တောင် သဲသဲလှုပ်ချစ်ကြ လေးစားကြ ချီးကျူးကြ တသသ တရွရွ တမမ တဖွဖွ ဖြစ်နေရလဲ။ ကဲကိုကဲလွန်းတယ်.။ ဒေါ်စုကို အောက်တန်းကျမိုက်ရိုင်းစွာ အပုပ်ချ ရေးသားနေတဲ့ ၀က်ဆိုက်တခုမှာလည်း ဒေါ်စုရဲ့မကောင်းကွက်တွေကို ရှာကြံပြီး လုပ်ကြံအပုပ်ချကြတယ်။ သန်းပေါင်း ၆၀ လူဦးရေမှာ သူဦးဆောင်မှပဲ တိုင်းပြည် တိုးတက်ပြောင်းလဲ တော့မှာလား.. သူတယောက်ပဲ ရှိသလားလို့။ ဒီလိုပြောင်းပြန် တမင်စဉ်းစားကြည့်ကာမှ အဖြေတွေကပေါ်လာပါတယ်။
၁။ ဘာသာစကား...မြန်မာလူဦးရေ သန်း ၆၀စလုံး အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်နေဖို့မလိုပါဘူး။ ဂျပန် ထိုင်း တရုတ်တို့မှာလည်းပြည်သူတိုင်း အင်္ဂလိပ်စာ မကျွမ်းကြပါဘူး။သို့သော် နိုင်ငံ အုပ်ချုပ်သူခေါင်းဆောင်များ လူကြီးများ ကတော့ vocabulary, pronunciation, intonation, tone, grammar, usage, ကအစ ကျွမ်းကျင်နေရမှာပါ။ ဒါမှ နိုင်ငံတကာနဲ့ ဆက်ဆံလို့အဆင်ပြေမှာပါ။ ဒီအရည်အချင်းဒေါ်စုမှာ ၁၀၀% ရှိတယ်။
၂။ ဗသုသုတ .... something special, everything normal ဆိုတဲ့ စကားလို အရာရာသော ရှုတ်ထွေး ကျယ်ဝန်းလှသော ပြသနာကိစ္စကြီးငယ် တွေကို အကြမ်းဖျဉ်း(မှန်ကန်စွာ) ခြုံငုံဆင်ခြင်နိုင်သော အထွေထွေ ဗဟုသုတနဲ့ အရေးကြီးသော အကြောင်းအရာတွေကို အဂတိတရားမပါ အမြင်ကြည်လင် မတိမ်းမစောင်း စေ့ငုသေချာ ဂဃနဏသိဖို့လိုပါတယ်။ ဒီအရည်အချင်းဒေါ်စုမှာ ၁၀၀% ရှိတယ်။
၃။ ရုပ်ရည် ....လူတိုင်းဟာ ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးလိုချောမော လှပနေစရာမလိုပါဘူး။ သို့သော် နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဆိုတာ လူဘုံအလယ်မှာ တင့်တယ်ခန့်ငြား ကျက်သရေရှိသော မျက်နှာမြင် ချစ်ခင်လေးစား လောက်သော (ဒီခေါင်းဆောင်ဟာ အတွင်းစိတ်ကောင်းပါ့မလား..ဟု သံသယ လုံးဝမရှိနိုင်လောက်သော) မျက်လုံး နှုတ်ခမ်း နဲ့ မျက်နှာ သွင်ပြင်ရှိရ ပါမယ်။ အ၀တ်အစားအရောင် ဒီဇိုင်း ရွေးချယ်မှု ကိုယ်နေလှုပ်ရှားဟန် များကလည်း ခန့်ငြားတည်ငြိမ် မဟော့ရမ်း မကလက် ပဲ ဆင့်ရှိအတန်းရှိ နန်းဆန်ရပါမယ်။ ဒီအရည်အချင်းဒေါ်စုမှာ ၁၀၀% ရှိတယ်။ ဒါတောင် အသက်ကြီးသွားလို့။ ခုနေများ ၅၀ကျော်လောက်ဆို ကောင်းလေစွ။
၄။ ပညာ ......တက္ကသိုလ်ကရတဲ့ဘွဲ့မှ ပညာလို့မပြောနိုင်ပါဘူး။ လူမှာ အတတ်ပညာ အသိပညာ နှစ်မျိုးမျှတစွာ ရောစပ်နေဖို့လိုအပ်တဲ့နေရာမှာ နာမည်ကျော်ကမ္ဘာ့တက္ကသိုလ်ကြီးက နိုင်ငံေ၇း ဆိုင်ရာဘာသာရပ်မှာ ရခဲ့တဲ့ ဘွဲ့အပြင် နိုင်ငံတကာမှာလုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံများနဲ့ ရေးသားခဲ့တဲ့ စာအုပ်များစွာ၊ ရောက်လေရာမှာ လေ့လာဆည်းပူးတတ်တဲ့အကျင့်၊ အိမ်မှာ အကျဉ်းကျနေစဉ်ဖတ်ရှုခဲ့တဲ စာအုပ်များစွာကြောင့် ဒီအရည်အချင်း လည်းဒေါ်စုမှာ ၁၀၀% ရှိတယ်။
၅။ သီလ သမာဓိ......နိုင့်ငံခေါင်းဆောင် ဆိုတာ သာမန်ပြည်သူလို သီလမလုံ တရားမရှိ နေချင်သလို နေမရပါ။ ကြံဖန်ပြောရရင် ဒေါ်စုဟာ လူမျိုးခြားကိုလက်ထပ်ခဲ့ခြင်းကလွဲလို့ ဘာမှ အပြစ်ပြောစရာ မရှိအောင်ဘ၀တလျှောက်လုံးနေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်ခြင်း၊ (လူမျိုးခြားဆိုပေမဲ့ ဒေါ်စုအား ချစ်ခင်လေးစား တန်ဘိုးထားနားလည်ပေးတတ်တဲ့ ပညာရှိတဲ့ မိမိနှင့် သားများ ကိုပါ ဗုဒဘာသာသို့ပြောင်းလဲခဲ့နိုင်တဲ့ ခင်ပွန်းကောင်းဖြစ်ပါတယ်။)၊ အိမ်တွင်းအကျဉ်းကျစဉ် ၀ိပသနာတရားအားထုတ်မှုကို မပြတ်လေ့ကျင့် ပွားများခဲ့ခြင်း ဆရာတော်ကြီးများရဲ့ဆုံးအမကို မပြတ်ခံယူခြင်း တို့ကြောင့် ထိုအရည်အချင်း ဒေါ်စုမှာ ၁၀၀% ရှိပြန်ပါတယ်။
၆။ သတိ...သာမန်လူတိုင်းဟာ မနော ၀စီ ကာယကံများကို အချိန်နဲ့အမျှပြုနေကြရာမှာ အမှတ်တမဲ့ သတိကင်းမဲ့လျက်နဲ့ အမှားများစွာ ပြုပြောတွေးနေမိတတ်ပါတယ်။ ဒေါ်စုရဲ့ အမူအရာ စကားလုံး ကိုယ်နေ ဟန်ပန် တို့ကိုကြည့်ပါ။ ထိုင်နေလျှင် ခါးစန့် ခါးမတ်၊ ဦးခေါင်းကိုမတ်၊ ပျင်းပျင်းရိရိကြောကို မမှီ၊ ဒူးကိုဘယ်တော့မှမချိတ်၊ မိန့်ခွန်းများပြောရာမှာ မည်သည့်ဘာသာစကားကိုပြော ပြော လေသံအတက်အကျက မမြင့်လွန်း မနိမ့်လွန်း မနှေးလွန်း မမြန်လွန်း၊ ပျာယာမခတ်။ ရှူးရှူးရှဲရှဲမရှိ။ မှားလို့ပြန်ပြောရသည်ဆိုသည် မရှိသလောက်ရှား။ ဒါကသတိကပ်နေခြင်းရဲ့ သက်သေ။ အသံကလည်း ပီသ၊ မျက်နှာအမူအရာက တည်သင့်လျှင်တည် ရီသင့်လျှင်ရီ ပြုံးတန်ပြုး ထုံပေပေ ပေါတောတော စပ်ဖြဲဖြဲ ဘယ်ခါမှမရှိ၊ ။ သည်လောက်မအားသည့်ကြားက အ၀တ်အစား ဘိုသီဘတ်သီ မရှိ။ ဒါကြောင့် သတိ ဟူသော...ထိုအရည်အချင်း ဒေါ်စုမှာ ၁၀၀% ရှိပြန်ပါတယ်။
၇။ အသံ..... အဆိုတော်များ တမျိုးစီ အသံကောင်းကြပါတယ်။ သီချင်း မဆိုလည်း အသံကောင်းသူ များစွာရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူတိုင်းရဲ့အသံများမှာ အရောင်လေးတွေပါကြပါတယ်။ အားငယ်သံ မောက်မာသံ အထက်စီးသံ မာနသံ ကြွားဝါသံ ပညာရှိသံ ပညာမဲ့သံ ရိုးသားသံ မြို့ပြသံ ကျေးလက်သံ ဟန်ဆောင်သံ တရားသံ ဆရာကြီးသံ...ပွဲစားသံ ..ထုံထိုင်းသံ..ပျင်းရိသံ...စသဖြင့်။ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်၏အသံကတော့ ပညာရှိသံ ပြတ်သားတိကျသံ ရိုးသားဖြူစင်သံနဲ့ တိုင်းသားပြည်သူများအပေါ် မေတ္တာစေတနာငွေ့ လွှမ်းခြုံနေတဲ့ အသံဖြစ်ရပါမယ်။ ထိုအရည်အချင်း ဒေါ်စုမှာ ၁၀၀% ရှိပြန်ပါတယ်။
၈။ မျိုးရိုး....ဘယ်လောကမှာမဆိုအောင်မြင်လာမဲ့သူဟာ ရှေ့ကမျိုးရိုးရှိချင် မှရှိမှာပါ။ မျိုးရိုးရှိတိုင်းလည်း ဆက်ခံတဲ့သားသမီးမြေးမြစ်က အဖြစ်ရှိ ချင်မှရှိမှာပါ။ ဗိုလ်မင်းရောင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းစတဲ့ သတ္တိပြောင်တဲ့ မျိုးရိုးကို ထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့သွေးနဲ့ မျိုးရိုးအရည်အချင်းမျိုး အကိုမှာတောင် မရှိဘဲ ဒေါ်စုမှာသာလျှင် ၁၀၀% ရှိပြန်ပါတယ်။ အင်မတန် မြန်မာဆန်ပြီး အနေအထိုင် လိမ်မာ ကျစ်လျစ်တဲ့မိခင် ဒေါ်ခင်ကြည့်ရဲ့ သွန်သင်ဆုံးမမှု ဟာလည်း မြန်မာဆန်တဲ့ သတ္တိရှိရဲရင့်တဲ့ သမီးကောင်းလေးကို ပေါ်ထွန်းစေ ခဲ့တာဟာ ငြင်းမရပါဘူး။
၉။ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံသောစိတ်..... နေက္ခမ္မပါရမီလို့ပြောရင် လွန်မလား မသိ။ တိုင်းပြည်ကို ခေါင်းဆောင်မဲ့သူဟာ ပုဂိုလ်ရေးရာ family / personal ခံစားချက်တွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး လျစ်လှူရှုနိုင်ရပါမယ်။ မိမိဘ၀နဲ့ အချိန်တွေ စိတ်အာရုံတွေကို နိုင်ငံနဲ့ပြည်သူအတွက် ပေးဆပ်နိုင်ရပါမယ်။ ထိုအရည်အချင်း ဒေါ်စုမှာ ၁၀၀% ရှိကြောင်းကတော့ မိန်းမတသန်းမှာ တယောက်တွေ့ရနိုင်ခဲ့တဲ့ ခင်ပွန်းနဲ့ သားတွေရဲ့ ဘ၀အဆင်ပြေမှုတွေကို လုံးလုံးလျားလျား လျစ်လျူရှုခဲ့တဲ့ ဒေါ်စုရဲ့စိတ်ထားမျိုးကတော့ အထူးပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး။
၁၀။ မေတ္တာ..... သတ္တလောကကြီးကို ထိန်းချုပ်ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိသော အရာဟာ စစ်မှန်တဲ့မေတ္တာပါပဲ။ မိမိ မိသားစုဝင် သုံးယောက်က် သန်းပေါင်း ၆၀သော လူသားတွေအတွက် မေတ္တာကြီးစွာထားခဲ့သူပါ။ မေတ္တာတရားနဲ့ပြည့်ဝလွှမ်းခြုံနေတဲ့မျက်ျနှာ မျိုး လူတိုင်းမှာ မတွေ့နိုင်ပါဘူး။ ထိုအရည် အချင်း မေတ္တာဓါတ်မျိုး ဒေါ်စုမှာသာ ၁၀၀% ရှိကြောင်း ဦးနှောက်မှန်တဲ့ လူတိုင်းရဲ့နှလုံးသားက ခံစားလို့ရပါတယ်။
ပြောခဲ့တဲ့ အချက် (၁၀)ချက်အပြင် အခြားများစွာသော ထူးခြားအရည်အချင်း များနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ ဒေါ်စုနဲ့ တူညီပြည့်မှီတဲ့ အခြား မြန်မာအမျိုးသမီးတဦးဦး မရှိနိုင်ပါဘူး။ တခုတူရင် တခု လိုနေမှာပါ။
ဒါ့ကြောင့်.....
မြန်မာနိုင်ငံရှေ့ရေးအတွက် ဦးဆောင်ရမဲ့ နှစ်တရာတခါ ပေါ်ပေါက်ခဲတဲ့ မရှိမဖြစ်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် သည်လောက်တောင် သဲသဲလှုပ်ချစ်ကြ လေးစားကြ ချီးကျူးကြ တသသ တရွရွ တမမ တဖွဖွ ဖြစ်နေကြတဲ့ လူတွေ လုံးဝ မလွန်ပါဘူး ။ကျနော်အခုလို ထင်မြင်ရေးသားမိတာလည်း မလွန်ပါဘူး... ဒေါ်စုကို ချစ်ရင်လေးစားရင် ချစ်နေယုံနဲ့ မပြီးပဲ မိမိတို့ရောက်ရာနေရာတိုင်းမှာ ပြတ်သားရဲရင့် ထက်မြက် တည်ငြိမ်စွာ မြန်မာလူမျိုးသိက္ခာထိန်းကြပါ လို့ရဲရဲကြီးပြောရင်း..
Photo credit to photo owner I m sorry for unrecognize photographer
တင်ပြသူ ကိုကိုကျော် အချိန် 11:31 PM0ယောက် အကြံပြုထားပါသည်
ယနေ့ မလေးရှားနိုင်ငံ ဘလက်ခေါင်း သာသနာ့အောင်စည် ကျောင်းတိုက်တွင် ရွှေဝါရောင်တော် လှန် ရေး(၅)နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကို၂၃.၀၉.၂၀၁၂နေ့ တွင်စီကားသိုက်မြိုက်စွာကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ ပါသည်။
အခမ်းအနားကို အစီအစဉ် ၅ ခုဖြင့်ဖွင့်လှစ်သွားပါသည် …
ပထမဦးစွာ အခမ်းအနားအစီအစဉ်ကို စတင်ဖွင့်လစ်ကြောင်းကြေငြာ…
၁ ။ သာသနာ့အလံတော်ကို အားအလေးပြုခြင်း၊ ထိုနောက် ၁၉၄၇ ခုနှစ်ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲမှသည် ယနေ့ ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့ အခွင့်ရေးတိုက်ပွဲအသီးသီးအထိအသက်ပေးတိုက်ပွဲဝင်စွန့် လွှတ်အနစ်နာခံကာ ဘဝကိုစတေးခဲ့ ကြသော ဗိုလ်ချုပ်နှင့်တကွရဟန်းရှင်လူပြည်သူတို့ အားဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်း အမှတ်အ ဖြစ်တစ်မိနှစ်ငြိမ်သက်၍အလေးပြုခြင်း……..
၂ ။ အဖွင့်သီချင်းအဖြစ်နိုင်ငံကျော်အဆိုတော် ဒေါ်မာမာအေး၏(သံဃာတွေသွေးမြေကျရပြီ သီချင်းဖြင့် ဖွင်လစ်ခြင်း…
၃ ။ အဖွဲ့ အစည်းအသီးသီးမှတက်ရောက်လာကြသော ခေါင်ဆောင်များကိုယ်စာလှယ်တို့ မှ ကြေငြာစာတန်း
(က) ဦးစွာသီရိလင်္ကာရောက် မြန်မာကျောင်းသားရဟန်းတော်များအဖွဲ့ -MSMA,Myanmar Students’ Monk Association-မှအတွင်းရေးမှူးဟောင်း ဆရာတော်ဦးဇာဂရဗုဒ္ဓိ မှအမှာစကားပြောကြားခဲ့ ခြင်း။
၂ ။ ( ခ ) ကြားဖြတ်အစီအစဉ်အဖြစ် DVB ပင်တိုင်အဆိုတော် ထက်အောင်ရှိုင်းမှ (မော်ကွမ်းပြန်ကြည့် ကမ္ဘာကသိ) သီချင်းဖြင့်သီဆိုဖျော်ဖြေသွားခြင်း…
( ဂ ) Burma Youth Strike Organization မှ ဥက္ကဌ ဦးကိုကိုမှ အမှာစကားပြောကြားသွားခြင်း…
( ဃ) လူဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ မလေးရှားမှ ကိုယ်စလှယ် ကိုသားကြီးမှ အမှာစကားပြောကြား ခဲ့ခြင်း….
၃ ။ ( င ) ကြားဖြတ်အစီအစဉ်အဖြစ် DVB ပင်တိုင်အဆိုတော် ထက်အောင်ရှိုင်းမှ (လူပီသကြပါစို့ )သီချင်းဖြင့် သီဆိုဖျော်ဖြေခဲ့ ခြင်း…
( စ ) NLD Youth (LA) Malaysia မှ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဖြစ်သူ ကျော်ကိုကိုကျော်မှ အမှာစကားပြော ကြားသွားခြင်း….
(ဆ) အထွေထွေသပိတ်ကော်မတီ-GSC, General Committee မှခေါင်းဆောင် ကိုအောင်ကြီးအား အမှာစ ကားပြောကြားသွားခြင်း…
၄ ။ ( ဇ ) ကြားဖြတ်အစီအစဥ်အဖြစ် ကဗျာဆရာ မင်းမောင် (ဆာမူရိုင်း) မှ “RE DOUBTABLE EGO” အင်္ဂလိပ် ကဗျာအာရွတ်ဖတ်သွားခြင်း…
( ဈ ) NLD KL မှကိုယ်စားလှယ် ကိုဝဏ္ဏမှ အမှာစကားပြောကြားသွားခြင်း။
( ည ) မလေးရှားမှ မြန်မာ့အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုထိုက်မှ အမှာစကားပြောကြားသွားခြင်း..
(မြန်မာကျောင်းသားရဟန်းတော်များအဖွဲ့ -MSMA,Myanmar Students’ Monk Association-မှအတွင်းရေးမှူးဟောင်း ဆရာတော်ဦးဇာဂရဗုဒ္ဓိ “ဒုက္ခတွေဖွေးဖွေးလှုပ်ပွင့်ခဲ့ တဲ့ မြို့ တော် “ ကဗျာ အားရွတ်
ကြားဖြတ်အစီအစဉ်အဖြစ် DVB ပင်တိုင်အဆိုတော် ထက်အောင်ရှိုင်းမှ (တို့ ပြည်တို့ မြေ ) သီချင်းဖြင့် သီဆိုဖျော်ဖြေခဲ့ ခြင်း…
Bloger ဦးကိုကိုကြီး မှ အမှာစကားပြောကြားသွားခဲ့ ခြင်…
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်သူ ပြည်ပရောက် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများမလေးရှာအဖွဲ့ ခွဲ တာဝန်ခံ ကိုမြတ်ကိုကို မှ ကျေးဇူးတင်စကားနှင့် အမှာစကားပြောကြားသွားခဲ့ ခြင်း……
၅ ။ အခမ်းအနားနောက်ဆုံး အစီအစဉ်အရ အခမ်းအနားအား “ ကမ္ဘာမကြေဘူးသီချင်း” ဖြင့် ကြွရောက်လာ သော ပရိတ်သတ်တို့ မှ သံပြိုင်သီဆို၍ အခမ်းအနာကိုအောင်မြင်စွာ ရုတ်သိမ်းခဲ့ ပါသည်။
တင်ပြသူ ကိုကိုကျော် အချိန် 12:29 AM0ယောက် အကြံပြုထားပါသည်
CNN မှ ဒေါ်စု အင်တာဗျူး
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ။ ။ တမျိုးကြီးဖြစ်တာတော့ မဟုတ်ရပါဘူး ။ ကျမ အရမ်းကျေးဇူးးတင် သဘောကျပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် တခါတလေ နေရထိုင်ရခက်တာမျိုးတော့ ရှိပါတယ် ။
CNN ။ ။ အဲဒါ ဘာကြောင့်များလဲ ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်။ ။ အလွန်အကျွံ အာရုံစိုက်ခံရရင် ဘယ်သူမှ နေတတ်မှာ မဟုတ်ဘူးလေ ။
CNN ။ ။ ဒါပေမယ့် ဒေါ်စုလုပ်ခဲ့တာတွေဟာ တကယ့်ကို ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် သက်ရောက်မှုတွေ ရှိခဲ့တယ်လေ ။ ဘယ်အရာကများ အကြီးကျယ်ဆုံး အောင်မြင်မှုလို့ ဒေါ်စု ထင်သလဲ ။ အားလုံးကို ပြန်ပြီး အနှစ်ချုပ်ရရင် ဘယ်လိုလုပ်ရပ်ကြောင့် ဒီလိုဆုတွေရတာလို့ ထင်ပါသလဲ ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ။ ။ ဘယ်ဟာက အကြီးကျယ်ဆုံးအောင်မြင်မှုတွေရလဲဆိုတာ ပြောဖို့ စောနေပါသေးတယ် ။ ဒီဆုတွေကို ရတာက ကျမတိုင်းပြည်က ပြည်သူ ပြည်သားတွေ ရောက်ချင်တဲ့ ပန်းတိုင်ကို ရောက်အောင် ကြိုးစားပေးခဲ့လို့ လို့ ထင်တာပါဘဲ ။
CNN ။ ။ ပန်းတိုင်ရောက်ဖို့ ခရီးကတော့ လိုသေးတာပေါ့လေ ။ ဒါပေမယ့် အခုအခြေအနေက အရင်နဲ့ အတော်ကွာတာ သိသာပါတယ် ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ် ၃ နှစ်လောက်ကထိ ဒေါ်စုအနေနဲ့ ဒီနေရာမှာ ဒီလိုထိုင်ပြီး အင်တာဗျူးတွေ ဖြေနေဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေ မဟုတ်လား ။ အခု ဒေါ်စုအနေနဲ့ မြန်မာပြည်အပေါ် ချမှတ်ထားတဲ့ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုတွေကို အဆုံးသတ်ဖို့ တိုက်တွန်းတော့မလား ။ အထူးသဖြင့် မြန်မာ့ ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်တွေအပေါ် ချထားတဲ့ ပိတ်ဆို့မှု export sanction ကို ပယ်ဖျက်ဖို့ တိုက်တွန်းမလားဆိုတာ သိပါရစေ ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ။ ။ အမေရိကန်ကို သွင်းတဲ့ မြန်မာ့ထုတ်ကုန်တွေအတွက် ပြောတာလား ။
CNN ။ ။ ဟုတ်ပါတယ် ။
ဖြေ ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ ။ ရုပ်သိမ်းသင့်ပြီလို့ ထင်ပါတယ် ။ လုံးဝကြီး ရုပ်သိမ်းတာမဟုတ်ရင်တောင် လျှော့ချတာမျိုး လုပ်လို့ရပါတယ် ။ အဲလို လုပ်တာကို ကျမ အားပေးမှာပါ ။ ကျမတို့ ပြည်သူတွေကို သူတို့ လုပ်နိုင်တာ လုပ်ပြဖို့ အခွင့်အရေး ပေးရမယ့် အချိန် ရောက်ပြီထင်ပါတယ် ။ ကျမ အရင်ကလည်း ပြောခဲ့ပါတယ် ......ပန်းတိုင်ကို ရောက်ဖို့ဆိုတာ ပြင်ပအားတွေကိုချည်း အမြဲကိုးစားနေလို့ မရပါဘူး ။ ကျမတို့ကို ပြင်ပ မိတ်တွေတွေက ကူညီတာကို အရမ်းကို ကျေးဇူးတင် ၀မ်းမြောက်ပါတယ် ။ ဆက်ပြီးကူညီလိမ့်မယ်လို့လည်း မျှော်လင့်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ကျမတို့ကိုယ်တိုင်လည်း ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ် တာဝန်ယူ ဖန်တီးဖို့ လိုပါတယ် ။
CNN ။ ။ ဆိုလိုတာက မြန်မာပြည်က တွင်းထွက်ပစ္စည်းတွေ ၊ ဂက်စ်တွေ နဲ့ သဘာဝသယံဇာတတွေ.....ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်.....အမေရိကန်ကို သွင်းဖို့ အချိန်ရောက်ပြီ ထင်တယ်ပေါ့ ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ ။ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု transparency နဲ့ ကိုယ်လုပ်တာကို တာဝန်ခံနိုင်မှု accountability တို့ တော့ ရှိရမယ်လေ ။
CNN ။ ။ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကိစ္စကရော......... ။ သမ္မတကြီးက သိပ်မကြာခင်တုန်းက လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ကြေငြာတယ်မဟုတ်လား ။ အဲဒီထဲမှာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ ပါတာကို ဒေါ်စုအနေနဲ့ အားရကျေနပ်ရဲ့လား ။ ကိုယ်မျှော်လင့်ထားသလောက် လွတ်ရဲ့လား ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်။ ။ ဟင့်အင်း.....ကျမတို့ စာရင်းမှာ ပါသလောက် မလွတ်လာပါဘူး ။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား စာရင်းက ကျမတို့ ပါတီတစ်ခုတည်းတင် ရှိတာမဟုတ်ဘူး ၊ ကျန်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေမှာလည်း စာရင်းတွေလည်း ရှိပါတယ် ။ အဲဒီစာရင်းတွေက NLD က စာရင်းထက် ပိုတောင် ရှည်သေးတယ် ။ ဒါကြောင့် အထဲမှာ မလွတ်ဘဲ ကျန်နေသူတွေ ရှိနေပါသေးတယ် ။
CNN ။ ။ လွတ်လာမယ်လို့ ကော ထင်လား ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ။ ။ ထင်ပါတယ် ။ တတ်နိုင်သလောက် အမြန်ဆုံး လွတ်ကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ် ။
CNN ။ ။ သမ္မတကြီးတို့ဘက်ကရော အဒီကိစ္စအပေါ်မှာ ဒေါ်စု တစ်သဘောတည်း ရှိကြရဲ့လား ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ။ ။ '' တစ်သဘောတည်း '' ဆိုတာ ဘာကို အတိအကျ ရည်ရွယ်ပြောချင်တာလဲ မသိဘူး ။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို လွှတ်သင့်တယ်လို့ ယုံကြည်တဲ့ လူတွေ အစိုးရထဲမှာ ရှိတယ်လို့ ကျမထင်ပါတယ် ။
CNN ။ ။ အခု ဒေါ်စုက သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ တွဲပြီး အလုပ်တွေ လုပ်နေတယ် ။ သူကလည်း အရင်က စစ်တပ်ကနော် ။ ဒီလူတွေဟာ ဒေါ်စုရဲ့ ခင်ပွန်းကို တွေ့ခွင့်မရအောင် ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့လူတွေ မဟုတ်လား ။ ဒေါ်စုရဲ့ သားတွေနဲ့ မတွေ့ရအောင် လုပ်ခဲ့သူတွေ မဟုတ်ဘူးလား ။ တိုင်းပြည်ကို ဖိနှိပ်ခဲ့တဲ့လူတွေဆိုတာ ထည့်မပြောနဲ့ဦး ။ ဒီလူတွေနဲ့ အလုပ်အတူတွဲလုပ်ရတာ ဘယ်လိုနေလဲ သိပါရစေ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ။ ။ သူတို့ ကျမအပေါ်လုပ်ခဲ့တာတွေကို ပုဂိုလ်ရေးအရလုပ်တယ်လို့ ကျမဘယ်တုန်းကမှ မယူဆခဲ့ပါဘူး ။ ဒါဟာ နိုင်ငံရေးလေ ။ နိုင်ငံရေးထဲ ၀င်ရင် ဒီလို ပြသာနာတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာ အစကတည်းက ပြင်ဆင်ပြီး ဖြစ်ရမယ် ။ ကျမ စစ်ဗိုလ်တွေတော်တော်များများကို သဘောကျပါတယ် ။ ပြောရရင်တော့ ကျမက လူတွေ အပေါ် များသောအားဖြင့် သဘောကျတာ များပါတယ် ။
CNN ။ ။ စစ်ဗိုလ်တွေအပေါ် သဘောကျတယ်လို့ ပြောတာ ကြားရတာ အတော် အံ့သြမိတယ် ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ။ ။ တကယ်တမ်းတော့ တပ်မတော်ထဲက လူတွေနဲ့ ကျမ အမြဲတမ်း အဆင်ပြေခဲ့ပါတယ် ။ ကျမအဖေက ဗမာ့တပ်မတော် တည်ထောင်ခဲ့သူဆိုတာကို မမေ့နဲ့ဦးလေ ။ ဒါကြောင့်သူတို့လုပ်တာကို မကြိုက်ဘူးဆိုရင်တောင် ကျမ သူတို့အပေါ်မှာ မေတ္တာရှိပါတယ် ။
CNN ။ ။ ဒီလိုကြားရတာ အံသြလိုက်တာ ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ။ ။ တကယ်လားရှင့် ။
CNN ။ ။ ဟုတ်တယ် ။ ကျမ အံ့သြမိတယ် ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ။ ။ ကျမအတွက်တော့ ဘာမှ အံသြစရာ ကိစ္စမဟုတ်ဘူး ထင်ပါတယ် ။
CNN ။ ။ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကနေ ပြည့်ဝကောင်းမွန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ဘက်ကို ကူးပြောင်းဖို့ အရာမှာ သမ္မတကြီးနဲ့ ဒေါ်စုတို့ရဲ့ ဆက်ဆံရေးဟာ အရေးကြီးတယ်လို့ ထင်ပါသလား ။ ပုဂိုလ်ရေးဆက်ဆံမှုတင်မကဘဲ နိုင်ငံရေးအရဆက်ဆံမှုကို ဆိုလိုတာနော် ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ။ ။ ဒီလို အလုပ်မျိုးကို ပုဂိုလ်ရေးရှုထောင့်ကနေ တွေးနေတာဟာ နည်းနည်း အန္တရယ်များတတ်တယ်လို့ ကျမထင်ပါတယ် ။ ဦးတည်ချက်အရ ဓမ္မဓိဌာန်ကျကျ ပိုကြည့်သင့်ပါတယ် ။ အစိုးရအတွင်းက အမှုဆောင်တွေရယ် ၊ လွှတ်တော်ရယ် ၊ တရားရေး မဏ္ဍိုင်ရယ်ဟာ ကျမတို့အားလုံး တည်ဆောက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ ဒီမိုကရေစီအခြေခံအုတ်မြစ်တွေ တည်ဆောက်ရာမှာ ၊ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုလုပ်ရာမှာ ပူးပေါင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ် ။
CNN ။ ။ ဟုတ်ပါပြီ ။ ဒေါ်စုအနေနဲ့ ဒါကို ပုဂိုလ်ရေးတာဝန်အနေနဲ့ မခံယူချင်ဘူးဆိုတာ သိပါတယ် ။ personal ဆိုတဲ့ ဘောင်ထဲမှာ မထည့်ချင်ဘူးဆိုပါတော့ ။ ဒါပေမယ့် အမှန်ပြောရရင်တော့ ဒီလိုတွေ ဖြစ်လာတာ ဒေါ်စုကြောင့်လေ ။ ဒေါ်စုက ဒီကိစ္စတွေကို အကောင်အထည်ပေါ်လာအောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဘဲ ။ ဒေါ်စုလို လူမပါခဲ့ရင် ဒါ ဘယ်ဖြစ်လာပါ့မလဲ ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ။ ။ဟင့်အင်း....ကျမကတော့ အဲလို မယူဆပါဘူး ။ ပြည်သူတွေ မပါခဲ့ဘူးဆိုရင်သာ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်တာပါ ။ အမေရိကန်ကလည်း ကျမတို့ကို အားပေးခဲ့ပါတယ် ။ ဒီအတွက် ကျမ အမေရိကန်လွှတ်တော်ကို ကျေးဇူးတင်ရပါတယ် ။ အမေရိကန် သမ္မတ အုပ်ချုပ်ရေးအသီးသီးကို ကျေးဇူးတင်ရပါတယ် ။ တကမ္ဘာလုံးကလည်း ကျမတို့ကို အများကြီး အားပေးခဲ့ကြပါတယ် ။ လူတိုင်းဟာ ကိုယ့်လုပ်ရပ်အတွက် ၊ ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက် တာဝန်ယူရမယ်လို့ ကျမ ထင်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ကောင်းတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ အားလုံးဟာ ငါ့တစ်ယောက်တည်းကြောင့်လို့တော့ ထင်လို့ မရပါဘူး ။
CNN ။ ။နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကျစဉ်တုန်းက အဲဒါကို ခံနိုင်ဖို့ ၊ ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ ဒေါ်စုအနေနဲ့ အတော်ကလေး ခေါင်းမာခဲ့ရတယ်၊ စိတ်မာခဲ့ရတယ်လို့ ကျမထင်ပါတယ် ။ ကိုယ်လုပ်နေတဲ့အလုပ် ၊ ကိုယ်လိုချင်တာရဖို့အရေး အတော်လေး မဆုတ်မနစ် အလျော့မပေး လုပ်ခဲ့ရမှာဘဲနော် ။ အခု အလျော့ပေးစေ့စပ်ရေးတွေလုပ်ဖို့ ဒေါ်စု ပြောနေတယ် ။ အဲဒီ အကူးအပြောင်းအကြောင်းလေးလည်း သိပါရစေ ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ။ ။ တကယ်တမ်းတော့ အကူးအပြောင်းကာလဆိုတာ ဘယ်တုန်းကမှ မရှိခဲ့ပါဘူး ။ ကျမအနေနဲ့ ညှိနှိုင်းဖို့ အခွင့်အရေးမှ မရခဲ့တာ ။ လူတွေက ကိုယ့်ကို စကားပြောမှ ညှိနှိုင်းတယ်ဆို လုပ်လို့ရမှာလေ ။ ဒီတိုက်ပွဲတလျှောက်လုံးမှာ ဘယ်တုန်းကမှ ဆွေးနွေးခြင်း dialogue တွေလုပ်ခွင့် မရခဲ့ပါဘူး ။ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေနဲ့ တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းခြင်း consultation တွေ စစ်အစိုးရဘက်က မလုပ်ခဲ့ဘူး ။ ဒီတော့ ကျမတို့မှာ အလျှော့ပေးစေ့စပ်ရေးလုပ်ဖို့ အခွင့်အရေး ရခဲ့တယ်ဘဲ မရှိတာ ။ ကျမပြောင်းလဲ သွားတယ်လို့ လူတွေက တချိန်လုံးပြောနေကြတယ် ။ အရင်က ကျမဟာ ပိုပြီး ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်တတ်တယ်တဲ့ ။ တကယ်က ကျမပြောင်းလဲတာ မဟုတ်ပါဘူး ။ အခြေအနေတွေက ပြောင်းသွားတာပါ ။ ကျမဘက်က ရင်ကျက်လာတာတော့ ပါတာပေါ့လေ ။ အနှစ် ( ၂၀ ) လောက်ကြာမှတော့ လူဆိုတာ ရင့်ကျက်လာတာ မဆန်းဘူးလို့ ထင်ပါတယ် ။
CNN ။ ။ဒါပေမယ့် ဒေါ်စုက ညှိနှိုင်းခြင်းအတတ်ပညာကို သင်ယူနေတယ်လို့တော့ ပြောကို ပြောခဲ့တာဘဲ မဟုတ်လား ။ အပေး အယူသဘောတွေ ၊ ညှိနှိုင်းခြင်းကနေရတဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကို သင်ယူနေတယ်ဆို ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်။ ။ အဲဒါက လွှတ်တော်ထဲမှာလုပ်ရတဲ့ သဘောတရားကို ပြောတာပါ ။ လွှတ်တော်ထဲကို ရောက်တာ ကျမ လပိုင်းဘဲ ရှိပါသေးတယ် ။ လောလောဆယ် လွှတ်တော်ထဲက အခြေအနေတွေအတွက် ကျမအရမ်းကို အားတက်ဝမ်းသာရပါတယ် ။ လွှတ်တော် ဥက္ကဌက အတော်လေး သမာသမတ်ကျပြီး ကျမတို့ကို လူနည်းပေမယ့် တကယ့် ထိုက်ထိုက်တန်တန် အတိုက်အခံလို ဆက်ဆံပါတယ် ။
CNN ။ ။ ဟိုးအရင်တချိန်က အဖြစ်အပျက် တစ်ခုကို သတိရသေးလား မသိဘူး.......စစ်သားတွေက သူတို့ဘက်ကို လျှောက်လာတဲ့ ဒေါ်စုကို သေနတ်နဲ့ ချိန်ထားဖူးတယ်နော် ။ အဲဒီအဖြစ်ကို မှတ်မိသေးလား ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ။ ။ အဲဒီအဖြစ်က ကြာလှပါပြီ ။
CNN ။ ။ မှတ်မိသေးလား သိပါရစေ ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ။ ။ မှတ်မိပါတယ် ။
CNN ။ ။ တခြား လူတွေက နောက်မှာ ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီး ဒေါ်စုတစ်ယောက်တည်း ရှေ့ကို ဆက်တိုးသွားတာနော် ။ သူ့တို့ဆီကို တည့်တည့်ကို လျှောက်သွားတော့တာဘဲ ။ အဲဒီတုန်းက စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုခံစားရလဲ ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ။ ။ ပြောရရင်တော့ ကျမမှာ ရွေးချယ်ခွင့် သိပ်ရှိခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး ။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ အစက သူတို့ပြောတာက အားလုံး လမ်းဘေးကို ကပ်ပါ တဲ့ ။ ဒါကြောင့် ကျမက လမ်းဘေးက ကပ်နေကြဖို့ ကျမတို့လူတွေကို ပြောပါတယ် ။ ပြီးလည်းပြီးရော အဲဒီ ဗိုလ်မှူးက လမ်းဘေးကပ်ကပ် ၊ လမ်းပေါ်လျှောက်လျောက် ပစ်မယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုး ပြောတယ် ။ ဒီတော့ကျမလည်း ဒီလိုဆိုရင်တော့ လမ်းပေါ်တက်တာက ကောင်းမယ် ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ ။( ရယ်လျက် )
CNN ။ ။ တကယ်လည်းကျရော သူတို့ မပစ်ခဲ့ဘူးနော် ။ အဲဒါကိုရော ဘယ်လို ဘာကို ပြသလဲ ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ။ ။ မပစ်ဘူးဆိုတာက ဒီလိုပါ ... အဲဒီအချိန်မှာ ဗိုလ်မှူး major တစ်ယောက်က ပြေးလာတယ် ။ အစက သူက ကျမတို့နောက်က လျှောက်နေတာ ။ ပြီးမှ ပြေးလာပြီး တာဝန်ကျတဲ့ စစ်ဗိုလ် captain လေး ထင်ပါရဲ့ .....သူ့ကို မပစ်ဖို့ အမိန့်ပေးတာပါ ။
CNN ။ ။၂၀၀၃ မှာ ဒေါ်စု အသက်ကို ရန်ရှာခံရတဲ့ အထိ ဖြစ်ခဲ့တယ်နော် ။ ( ဒီပဲရင်းကို ဆိုလို ) ။ လူတွေ အများကြီးသေကြတယ် ။ အဲဒီအဖြစ်အပျက်မျိုးကြီး နောက်ပိုင်းမှာတောင် ဒေါ်စုဘာကြောင့် ဆက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သလဲ ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ။ ။ ဘာကြောင့် ဆက်တိုက်ပွဲ မ၀င်ဘဲ နေရမှာလဲရှင် ။ လူဆိုတာ ရှေ့ဆက်ပြီး သွားနေရတာဘဲလေ ။ အထူးသဖြင့် အဲလို အဖြစ်အပျက်တွေကြောင့်ကို ဆက်တိုက်ပွဲဝင်ရတာပေါ့ ။
CNN ။ ။ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေအကြောင်းကို ဒေါ်စု ပြောခဲ့တယ်နော် ။ စစ်တပ်က ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေ လုပ်လာဖို့၊ ဒီမိုကရေစီလမ်းကို ဖောက်ရာမှာ စစ်တပ်က ပါဝင်လာဖို့ sanction တွေက ဘယ်လောက် ထိရောက်အရေးပါသလဲဆိုတဲ့ အချက်အပေါ် အငြင်းပွားမှုတွေ ရှိနေသလိုဘဲ ။ ဒေါ်စုအနေနဲ့ sanction တွေကြောင့် အဲဒီလို ဖြစ်လာတယ်လို့ ထင်ပါသလား ။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ သိတဲ့အတိုင်းဘဲ sanction တွေ ချမှတ်ခဲ့ပေမယ့် စစ်တပ်က ပြင်ပကမ္ဘာနဲ့ အဆက်အသွယ်တွေတော့ နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ရှိနေခဲ့တာဘဲ ။ ပြည်သူတွေမှာ အလုပ်ပြုတ်တဲ့လူပြုတ်ပြီး ထိခိုက်ရတယ် မဟုတ်လား ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ။ ။ sanction တွေဆိုတာ တစ်ခုတည်းကြောင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး reforms တွေ ဖြစ်စေခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် sanction တွေဟာ အရမ်းအရေးပါတဲ့ ကဏ္ဍက ပါတယ်လို့ ကျမထင်ပါတယ် ။ မပါဘဲနဲ့တော့ ဘာကြောင့် အစိုးရက ဒီ sanction တွေ ရုတ်သိမ်းအောင် တောင်းဆိုနေခဲ့မှာလဲ ။ sanction တွေဟာ နိုင်ငံရေးအရ အရမ်းကို အရေးပါပါတယ် ။ မြန်မာ့စီးပွားရေး အကြီးအကျယ် ထိခိုက်ခဲ့တာ sanction ကြောင့်လို့ မထင်ပါဘူး ။ ကမ္ဘာ့ ငွေကြေး အဖွဲ့ IMF ရဲ့ စစ်တမ်းတွေကို ကျမ အမြဲကိုးကားပြီး ပြောလေ့ရှိပါတယ် ။ မြန်မာ့စီးပွားရေး ချွတ်ခြုံကျရတာ sanction ကြောင့် မဟုတ်ဘဲ စီမံခန့်ခွဲမှု ညံ့ဖျင်းခြင်း mismanagement ကြောင့်ပါ ။
CNN ။ ။ ဒါဆို စီးပွားရေးထက် နိုင်ငံရေးနဲ့ စိတ်ဓါတ်ရေးရာပိုင်းမှာ sanctions တွေက ပိုထိရောက်ခဲ့တယ်လို့ ထင်တယ်ပေါ့ ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ။ ။ ဟုတ်ပါတယ် ။
CNN ။ ။ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒေါ်စုတို့ ပါတီက အပြတ်အသတ်နိုင်သွားလို့ စစ်အစိုးရက အံ့သြသွားတာမျိုး ရှိလား ။ NLD က ၀င်ပြိုင်တဲ့ နေရာအားလုံးနီးပါးမှာ နိုင်တယ်လေ ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ ။ အံ့သြမယ်လို့ ထင်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ထဲက တချို့ကတော့ ဒီလိုဘဲ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်ကြတယ် ထင်ပါတယ် ။
CNN ။ ။ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မျှော်လင့်ချက်လေးကို ပြောပါဦး ။ နေရာအများဆုံးရတဲ့ ပါတီဖြစ်လာမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါသလား ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ။ ။ ၂၀၁၅ အတွက်တွေးဖို့ စောပါသေးတယ် ။ အဲဒီမတိုင်ခင်လာမယ့် လောလောဆယ် ( ၂ ) ကာလက တကယ့်ဒီမိုကရေစီကို တည်ဆောက်ဖို့ ပိုအရေးကြီးပါတယ် ။ ဒါကဘဲ ၂၀၁၅ အတွက် ဆုံးဖြတ်ပေးသွားမှာပါ ။
CNN ။ ။ ဒေါ်စုက အရမ်းလူသိများတဲ့လူဆိုတော့ ပုဂိုလ်ရေးမေးခွန်း personal questions လေးတွေလည်း မေးချင်ပါတယ် ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ။ ။ ကျမက များသောအားဖြင့် personal questions တွေကို သဘောမကျပါဘူး ။ ( ရယ်လျက် )
CNN ။ ။ သဘောမကျဘူးဆိုတာ သိပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ကျမလည်း မိခင်တစ်ယောက် ဆိုတော့ ဒေါ်စုအခုလို လုပ်ခဲ့တာတွေအတွက် ပေးဆပ်ခဲ့ရတဲ့ အတိုင်းအတာကို သိချင်လို့ပါ ။ များသေားအာဖြင့် အလုပ်လုပ်နေရတဲ့ မိခင်တွေဟာ သူတို့ ကလေးတွေနဲ့အတူ မရှိဖြစ်တဲ့ အချိန်တွေအတွက် အကျပ်အတည်း ဖြစ်ရတယ် ။ ကလေးတွေအတွက် ပျက်ကွက်ရမှုကို ဘယ်လို အစားထိုး ပြန်ပေးရမလဲဆိုတာကို အကြီးအကျယ် စဉ်းစားလေ့ရှိကြတယ် ။ ကလေးတွေနဲ့ ဒေါ်စု မနေနိုင်တဲ့ ကာလတွေဟာ တခြား ကျမသိသလောက် မိခင်တွေအားလုံးထက်ပိုပြီး ဆိုးတယ် ၊ ပိုပြီးလည်း ကြာတယ် ။ အဲဒါတွေအတွက် ကလေးတွေကို တစ်နေ့ အစားပြန်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့များ စဉ်းစားဖူးသလား ။ ကလေးတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေး ပြန်အဆင်ပြေသွားခဲ့ပြီလား ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ။ ။ ကျမကတော့ ကျမကလေးတွေအတွက် ပြန်ပြီး အစားထိုးပေးဆပ်ရတာတွေလုပ်ရမယ်လို့ မယူဆပါဘူး ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့လည်း အခုဆို ကလေးတွေမဟုတ်တော့ဘူးလေ ။ အားလုံးအရွယ်ရောက်နေကြပြီ ။ သူတို့ကလည်း ကလေးတွေလို အဆက်ဆံ ခံချင်မယ် မထင်ပါဘူး ။ ဒီလိုဘဲ ယုံကြည်ပါတယ် ။ ကျမဖြစ်စေချင်တာကတော့ ကျမတို့ ဝေးကွာနေကြတဲ့ အခြေအနေပေါ်အခြေခံပြီးဘဲ ကောင်းမွန်တဲ့ ဆက်ဆံရေးတစ်ခု တည်ဆောက်ချင်တာပါဘဲ ။
CNN ။ ။ သားကြီး အလက်ဇန်းဒါးနဲ့ ဆက်ဆံရေးက စိမ်းတယ်လို့ ကျမဖတ်ရတယ် ။ သူနဲ့ တွေ့ဖို့ရော အစီအစဉ်ရှိလား ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ။ ။ ကျမသားနဲ့ ကျမ မစိမ်းပါဘူး ။ အချင်းချင်း နှစ်ပေါင်းများစွာ မတွေ့ကြတဲ့လူတွေဆို ဒီလိုဘဲ ပြောချင်ကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ် ။
CNN ။ ။ ကျမတို့ နောက်ဆုံး စကားပြောခဲ့စဉ်က ဒေါ်စုက သတိမပါတဲ့အကောင်းမြင်မှု မဖြစ်သင့်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်း သတိပေးခဲ့တယ် ။ ဒီတလော မြန်မာပြည်အပေါ်အကောင်းမြင်မှုဟာ ဒေါ်စုပြောတဲ့ reckless optimism များ ဖြစ်နေမလား ။ ဒါမှမဟုတ် ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းအခြေခိုင်နေပြီလို့များ ထင်သလား ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ။ ။ တချို့တွေဘက်ကတော့ သတိမမူဘဲ အကောင်းမြင်နေတာတွေ ရှိပါတယ် ။ ဒီနေရာမှာ မြန်မာပြည်မှာ ကိုယ်တိုင်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ကျမသဘောအကျဆုံး စီးပွားရေး ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် Sean Turnell ပြောတာကို ထည့်ပြောရမယ် ။ သူက အမေရိကန်မှာ ရွှေတွေ့တယ်ဆိုတုန်းက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေ အစုလိုက်အပြုံလိုက်သွားကြတဲ့ အကြောင်း ပြောလေ့ရှိတယ် ။ ကျမကတော့ အဲလိုပုံစံမျိုးကို မလိုချင်ပါဘူး ။ သတိမမူတဲ့ အကောင်းမြင်မှု reckless optimism ဆိုတာ အဲဒါကို ဆိုလိုတာပါ ။ အဲလို ဖြစ်နေလို့ တိုင်းပြည် အကျိုးရှိမှာ မဟုတ်ဘူး ။ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံသူတွေလည်း နောက်ပိုင်းမှာ စိတ်ညစ်ရမယ့် အဖြစ်မျိုး ရှိလာနိုင်တယ် ။ ဒီတော့ လူတိုင်း ကိုယ်လုပ်နေတာကို သေချာစဉ်းစားပါ ။ အကျိုးနဲ့ အပြစ်ကို ချင့်ချိန်ပါ ။ပြီးရင် သူတို့အတွက်ရော ကျမတို့တိုင်းပြည်အတွက်ရော အကောင်းဆုံးကို ရွေးလုပ်ပါ ။ ကျမအနေနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကို အကျိုးအမြတ်ရစေချင်ပါတယ် ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါတယ်ဆိုတာ မမြတ်ရဖို့ဘဲ မဟုတ်လား ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအကျိုးအမြတ်ဟာ သူတို့ရသလို ကျမတို့ ပြည်သူတွေလည်း ခံစားရသင့်တယ် ။
( 19 နဲ့ 20 ရာစုတွေမှာ တနေရာမှာ ရွှေတွေ့လို့ဆိုရင် အဲဒီနေရာကို တကမ္ဘာလုံးကလူတွေ အပြေးအလွှား ၊ အစုလိုက် အပြုံလိုက် သွားတာမျိုးတွေ ရှိခဲ့တယ် ။ မကောင်းတဲ့ အကျိုးဆက်တွေလည်း ဖြစ်ခဲ့တယ် ။ အမေရိကန်တစ်နေရာတည်း မဟုတ်ဘဲ သြစတြေးလျား ၊ ဘရာဇီး ၊ ကနေဒါ ၊ တောင်အာဖရိက များမှာလည်း အလားတူ ဖြစ်ခဲ့ဖူးသည် )
စီးပွားရေး ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် Sean Turnell
CNN ။ ။ ဒေါ်စုတို့ နိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကို ကျမတို့ ဘယ်လိုခေါ်ရမလဲ ။ ဒေါ်စုက အခမ်းအနားတွေမှာ စကားပြောတိုင်း Burma လို့ သုံးသွားတာတွေ့တယ် ။အခု မြန်မာဖြစ်နေပြီလေ ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ။ ။ အဲဒါကတော့ လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ရွေးချယ်မှုပါဘဲ ။ ၁၉၉၀ နောက်ပိုင်းနှစ်များကထင်ပါတယ် ..... နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့က Burma ကို Myanmar လို့ ခေါ်ရမယ်ဆိုပြီး လုပ်ခဲ့တာ ။ ဒါပေမယ့် ကျမကတော့ လူတိုင်းမှာ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့် ရှိတယ်လို့ ထင်ပါတယ် ။ ကိုယ့်အတွက် ခေါ်ရတာ ပိုအဆင်ပြေမယ်ထင်တဲ့ နာမည်ကို ခေါ်ဖို့ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ် ။
တင်ပြသူ ကိုကိုကျော် အချိန် 9:11 AM0ယောက် အကြံပြုထားပါသည်